Tena mila mpampiasa an'arivony tapitrisa amin'ny Linux ve isika? Kalitao alohan'ny habetsahana! | Avy amin'ny Linux
Tsy dia manao lahatsoratra firy aho -kevitra Aleoko manao lahatsoratra teknika bebe kokoa, na izany aza tiako ny mizara 'toerana' na hevitra efa nananako hatrizay.
Miady hevitra foana izahay (miaraka amin'ireo mpampiasa OS hafa na eo anelanelantsika) fa raha 1% fotsiny ny mpampiasa Linux (mazava fa diso), raha ambany ny tsenanay (marina)… ary eto no idirako ny adihevitra: «mila linux hanana mpampiasa an-tapitrisany kokoa izahay«
Tsy manohitra ny fampiasana betsaka ny Free Software aho, ny mifanohitra amin'izay, fa ny olako (sy ny fanontaniako) dia izao: «Tena mila mpampiasa 1.000.000 ve isika, izay tsy manome na inona na inona?»Noheveriko foana fa ny 10 izay ilaina dia tsara kokoa noho ny 1000 izay tsy, izany hoe, inona no ilàna ny fananana mpampiasa vaovao 1.000.000 raha toa ka karazan'ireo mpampiasa tsy mamaky boky torolàlana izy ireo, mangataka ny hanampiany azy ireo fa Izy ireo tsy manampy ny tenany (mamaky, mitady, manoratra, manadihady), ary izy ireo koa ve mpampiasa izay tsy miraharaha ny fiaraha-miasa na fanampiana ny fiaraha-monina?
Raha izany no zava-misy dia aleoko fotsiny manana mpampiasa vaovao miisa 100 amin'ny Linux, raha toa ireo mpampiasa 10 vaovao ireo no manao tatitra momba ny bibikely, izay alohan'ny hanontaniany voalohany dia namaky ilay rangahy izy ireo, nitady tao amin'ny Google, andramo ary andramo ny manome azy ireo ny tenany miaraka amin'ny vahaolana amin'ny olany, ary raha sanatria ka tsy vitan'izy ireo irery, rehefa mangataka fanampiana izy ireo dia mangataka izany dia tsy mitaky izany izy ireo ... ary koa ... mizara hazo fisaka na zavatra hafa toa izany izy ireo mba hanamorana ireo izay manandrana manampy, manamora ny asa.
Izay nolazaiko tamin'ny lohatenin'ny lahatsoratra ihany, farafaharatsiny tompoko ... farafaharatsiny tiako ny Quality noho ny Quantity, aleoko vitsivitsy ilaina noho ny maro ... tsy mahasoa.
Ity dia miresaka manokana sy manokana ny fihetsiky ny mpampiasa, ny mahasoa izay mety ananan'ny mpampiasa tsirairay na tsia amin'ny vondrom-piarahamonina eran-tany, satria raha mampiditra ny olan'ny mpamokatra isika, ny fanohanana dia tantara hafa tanteraka ny mpamily.
Tsy tsiambaratelo fa arakaraka ny ampiasain'ny mpampiasa Linux, lojika, ny fanampiana tsara kokoa omen'ny AMD sy Nvidia dia tokony hanome antsika ny mpamily ho an'ny OS antsika, ary ... Averiko ihany, tokony! Ny fananana% ambony amin'ny tsena (na farafaharatsiny tsy minutia) dia mety hanana tombony, hitantsika amin'ny vaovao izy ireo amin'izao andro izao miaraka amin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny lalao ho an'ny SteamMieritreritra ve ianao fa raha tsy nerd na 1000 fotsiny isika izay nampiasa Linux izay an'ny Steam dia ho nieritreritra antsika?
Araka ny hitanao, ny zavatra rehetra dia manana ny mahatsara sy maharatsy azy. Amin'ny lafiny iray, raha manana mpampiasa marobe mampiasa Linux isika, hatreto dia hitako fa ny ankamaroan'ireo mpampiasa ireo dia mitaky fanampiana, manana fomba fanao mahatsiravina, kamo tokoa ary tsy te 'handoto' ny tanany amin'ny terminal iray, raha% kely kosa dia ireo izay miraharaha ny fiaraha-miasa, manandrana mamaha ny olany, manandrana, manandrana, te hianatra. Raha etsy ankilany, tena ilaina ve ny manana% lehibe eny an-tsena mba hahamarika antsika ny mpanamboatra?
Quantity na kalitao…. Izay no fanontaniana! … inona ny hevitrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » hafa » Tena mila mpampiasa an'arivony tapitrisa amin'ny Linux ve isika? Kalitao alohan'ny habetsahana!
187 hevitra, avelao ny anao
Mihevitra aho fa tsy ny rehetra no liana amin'ny fanaovana compute hamakiana lehilahy, fa zavatra iray izay manao rakitra, na takelaka fotsiny, no tadiavin'izy ireo hiantsoana ny teknisiana. Ho toy izao foana.
Mampalahelo fa teknisiana maro ao amin'ny firenena ipetrahako (Peroa) no tsy liana amin'ny famahana olana amin'ny GNU / Linux, satria "tsy misy fangatahana firy".
Ny marina dia tena lehibe ny GNU / Linux, saingy ho azy manokana aho dia tiako fa farafaharatsiny misy ny tena liana amin'ny fampiasana GNU / Linux an'ireo linuxer Peroviana.
Tena liana amin'ny siansa informatika aho (mianatra in inf), efa nanao tutorial izay tsy ilaina intsony, nanamboatra programa maimaimpoana izay tsy ampiasain'ny olona intsony ary tsy miasa intsony izy ireo, nanampy olona tao amin'ny forum iray aho izay tsy fantatry ny farany fantatrao raha nahasoa izy io, fa ankehitriny dia toa tsy fanatsarana fotoana sy fahitana intsony intsony ... (afa-tsy ny vita vita amin'ny fandaharam-pianarana), nampiasa distros (gentoo, arch) koa aho ary izaho nianatra zavatra betsaka, fa raha vao nahalala ianao (izay no nahaliana ahy), ary ankehitriny amin'ny fandanjana bebe kokoa ny fotoako sy ny fahitako azy, tsy te hanohy handany fotoana sy ezaka aho fa aleoko ny zavatra rehetra vonona tsy misy fahasarotana ary mifantoka amin'ny hafa zavatra. Tsy haiko, tsy dia liana amin'ny linux intsony aho ... na dia tiako aza ny laoniny aterak'izany.
Tsy hoe tsy dia liana loatra aho, fa tsy mendrika ny handany fotoana amin'ny zavatra sasany.
Saingy, tsy hoe misy kalitao "betsaka" ananantsika ehh .., tsy hitako izay mahasamihafa ny fiarahamonina misy antsika, na ny an'ny paoma na an'ireo an'ny microsoft-eros xD
Aza miteny amiko akory. Amin'izay hitako ao amin'ny FayerWayer dia mihoatra noho izay ampy ho an'izay rehetra maneho hevitra any io mba ho voatifitry ny andian'ireo mpaneho hevitra tsy manam-paharoa any.
Chw dia mbola ratsy lavitra, eo anelanelan'ny habetsaky ny fanboy an'ny windows sy amd .., ary amin'ny genbeta dia mitovy ihany izany, saingy misy linuxeros mifangaro sy windowseros xD.
Avelao aho hiteny aminao fa, noho ny tsy fitandremana ataon'ny Disqus, misy ireo mpampiasa tena mangoraka ny fomba fanehoan-kevitr'izy ireo >> http://imgur.com/a/qRlWm
Hehe, fihomehezana miaraka amin'iny zalahy iny.
Eny, toa fanboy UNIX io lehilahy io. Ary teny an-dalana, aorian'ny ady tsara ao amin'ny tranon'akoho, ity a valiny tsara.
Manaiky tanteraka anao. Ankoatr'izay, mahazatra ny mahita olona mino ny menaka masinina ary tena manomboka mamolavola toa ny zavatra mahazatra indrindra eto an-tany. Ohatra iray amin'izany ny ity FayerWayer nandefa momba ny fitsikilovana NSA, izay misy mpampiasa roa izay tena tia tena (miala tsiny amin'i Bitly, saingy mampiasa azy io aho mba hahamora azy sy satria mahamenatra ny mametraka ny rohy feno).
Miala tsiny amin'ilay rohy fa tsy nety. Indro Ilay izy rohy.
Tsy programmer aho. Tsy teknisianina amin'ny solosaina aho. Mamaky ireo boky fampianarana aho rehefa ilaina izany. Tiako ny "mihodina" amin'ireo programa mifanaraka amin'ny zavatra ilaiko. Ho an'ny farany ary ny fahamarinan-toerana dia ny tiako ny Linux. Saingy tsy mieritreritra aho fa mpampiasa afaka manome zavatra ho an'ny fiarahamonina satria tsy mamaky hazo na bibikely na zavatra hafa aho. Saika mamaky ny bilaogy Linux amin'ny teny Anglisy sy Espaniola tokoa aho satria heveriko fa amin'ny famakiana dia mianatra ianao. Saingy hatramin'izao dia mbola tsy nitondra na inona na inona aho.
Imbetsaka izy io dia mandray anjara amin'ny lafin-javatra toy ny interface visual sy / na ny mombamomba ny maso iray (ohatra, Mozilla Firefox miaraka amin'ny interface Australis andrana).
Ny marina dia misy programa marobe tsara, saingy ny miantsoantso dia ny mpamorona interface interface iray izay manao ny programa ho azo ampiharina kokoa.
edgar.kchaz dia hoy izy:
Ary mora ve ny mianatra an'izany? Hoy aho, inona no tokony ho fantatro? ... Te-handray anjara betsaka amin'ireo lafiny izay aho rehefa milalao dia tsy mitsoka ny PC ...
Mamaly an'i edgar.kchaz
Amin'ny tranga maro dia ampy ny mandefa tolo-kevitra. Tsy voatery hianatra C ++ sy / na ho beta-tester ianao.
Nisy zavatra vao tonga tao amiko… Manomboka amin'izay, ny fanampiana zavatra lehibe dia lehibe hatramin'ny granite ka hatrany amin'ny granite dia toa tsy misy dikany, angamba eto aho dia miombon-kevitra amin'i KZKG, satria vitsy ny miasa miaraka amin'izay takian'izy ireo. Heveriko fa natao hambara izany. Ho hitako ny fomba hanampiako kely.
PS: Saika nandona ny saiko izany rehefa namaky C ++ XD ...
Ny tanjon'ny tetikasa GNU / Linux dia ny manolotra OS manaja ny fahalalahan'ny mpampiasa.
Azontsika atao ny manamarina an'io ary manome azy io ho toy ny zavatra vita.
Ny distros sasany, amin'ny maha tetik'asa misaraka azy ireo, dia tsy liana amin'ny kely indrindra hanana mpampiasa bebe kokoa, ny hafa kosa, manana ny tanjon'izy ireo hahatratrarana ny quota ampiasain'ny mpampiasa betsaka indrindra (ny GNU dia tsy mifanalavitra amin'ireo tanjona ireo), na amin'ny vola na amin'ny tena. fitiavana.
Ny farany sy ny fanboy indrindra amin'izy ireo dia ireo izay mampiroborobo ireo hevitra ireo, mifototra amin'ny fihazakazahana mba hanatanterahana izany.
Adinon'izy ireo fa ny tetik'asa eo amin'ny fiarahamonina (misy antony iray na hafa) dia hitombo kokoa noho ny an'ny tena manokana.
Noho izany, tsy resaka quota ambony kokoa ho an'ireo SOs ireo, fa ny tadiavina dia ny tombontsoan'ny besinimaro noho ny fahalalahany.
Ny olana dia misy boribory masiaka tsy mamela izany fahalianana izany, toy ny be loatra amin'ny lanjan'ny firenena sasany izany.
Misy olona fanatanjahan-tena sy salama izay mitaraina momba ny olona mavitrika vitsivitsy, momba ireo safidy sakafo mahasalama vitsivitsy any amin'ny magazay.
Fa ny olana dia ny olona tsy miraharaha ny fahasalamany, ary mividy izay tsy mahasoa azy ireo, ka manome tolotra lehibe kokoa an'ireo vokatra ireo, fampahalalana diso bebe kokoa momba ny tombony azo amin'ny fiainana salama sy zavatra hafa, izay amin'ny farany dia miteraka bebe kokoa olona matavy loatra.
"Tena ilaina ve ny manana% be eny an-tsena mba hahitan'ny mpanamboatra antsika?"
Eny, arakaraka ny haben'ny fangatahana no mahabe ny famatsiana.
Ny olona ao Steam (Valve) dia tsy tena nieritreritra momba antsika. Nanamboatra ny OS azy manokana tamin'ny fampiasana GNU / Linux izy ireo ary hamoaka ny consoles amin'ity rafitra ity, ka mazava ho azy fa mila ny lalao hataony amin'ny Linux izy ireo.
Uff fa misy ny mpampiasa mandroso izay troll XD kokoa
Ny hevitra teo aloha dia tsy natao ho anao, fa amin'ny ankapobeny, ary marina ny zavatra Steam, mazava ho azy fa tsy nataon'izy ireo ho an'ny mpampiasa linux (tsy hisy dikany ara-toekarena izany)
caesasol dia hoy izy:
Eto aho no mieritreritra fa i Ubuntu dia manao asa tsara mitokana amin'ny vondrom-piarahamonina. Amin'ny zavatra hafa rehetra dia manana ny distro hafa izahay.
LoL avelao ny switch switch an'ny mpampiasa
velona i borges dia hoy izy:
Mampihetsi-po ny tsena ny fangatahana, miaraka aminy ny filàna fampahalalana sy fandrosoana. Ohatra, raha Windows no nampiasaina tao an-tanàna ... OS inona no hodinihin'ireo teknisianina? Marina indrindra. Tsy voatery ho eo amin'ny mpilalao rehetra ny kalitao, fa rehefa misy ny fangatahana dia tsy ho ela vao hiseho.
Mamaly an'i borgesvive
Ho ahy dia tsara kokoa ho an'ny Linux ny ho lasa malaza kokoa noho ny zava-misy fa handrisika ireo mpanamboatra sy mpamorona ary hivoaka ireo distro madio sy mora azo kokoa. Hadalana ny fanolorana hevitra fa manohy an'ity toe-javatra ity isika satria voafehinao tsara izany, faly ianao ary tsy tianao ny mpampiasa "windows type". Tsy ny mpampiasa rehetra no manana fotoana na fialamboly hananganana fizarana…. fa raha zon'izy ireo ihany ny mampiasa Linux. Etsy ankilany, ny filozofia GNU resy lahatra aho fa hanangana tontolo egaliteraly tsara kokoa.
Izany no antony itiavantsika ireo mpandahatra programa 10 C mihoatra ny mpampiasa 1 tapitrisa an'ny * buntu, fa amin'ny farany dia tsara ny manatona ireo olona mahalala farafaharatsiny fa misy tontolo ao ambadiky ny varavarankely.
Ho an'ireo mpampiasa mahazatra indrindra izay nividy ny solosaina tamin'ny Windoor efa napetraka ary mino fa tsy misy zavatra hafa, dia natoraly izao tontolo izao toa izao ary toy izany hatrany, samy mampiasa azy ny tsirairay ary tiako izay ananan'ny tsirairay, apetranao debian miaraka amin'ireo mpamily rehetra ary tonga lafatra ny rafitra nefa tsy tadiavin'izy ireo izany, te hilalao CoD, Battlefield sns izy ireo ary hametraka azy tahaka ny ataon'ny "rehetra".
Ny raharahan'ny teknisianina, mpianatra amin'ny fandaharana na asa mifandraika amin'izany no tena mampalahelo indrindra satria tsy vitan'ny hoe hanana tombony azo tsapain-tanana toa ny antontan-taratasy misy izy ireo, fa koa ny kaody loharano sy ny fiteny fandaharana rehetra atolotry ny fizarana gnu / linux rehetra.
Rindrambaiko sy fampianarana maimaim-poana - Richard Stallman
kaze, torohevitra iray tsy afaka ny ho lasa dad ianao mihoatra ny papa, noho izany tsy izay rehetra mampiasa linux no mety ho lavorary, enga anie mba ho araka izay nolazainao ihany ny anao, fa tsy izany, dia mahareta ihany.
Heveriko fa manana sy tsy mety amin'ny zavatra arosonao ianao, avelao aho hanazava; Marina fa ny fihetsika (na ny fihetsika ratsy) an'ny ampahan'ny mpampiasa iray, dia mahatonga antsika aleontsika kalitao mihoatra ny habetsany, satria ireo izay tsy mandray anjara, dia tsy mamaky na manadihady ary koa mitaky amin'ny fomba ratsy hamahana ny olana, lasa manelingelina izy ireo ary miafara amin'ny fanaratsiana ny sisa amin'ireo mpampiasa GNU / Linux. Miorina amin'izany antony izany dia mora ny milaza fa ny mpampiasa kalitao vitsivitsy dia tsara kokoa noho ny mpampiasa an-tapitrisany izay tsy manana fahalalana na fikasana hahazoana izany.
Ankehitriny, araka ny nolazaiko hatrany, dia tadidio fa ny ankamaroan'ny olona mampiasa solosaina (ary ampiarahiko eto ny fitaovana hafa toy ny finday finday, takelaka sns.), Dia mihevitra azy io ho fitaovana iray hafa amin'ny andavanandron'izy ireo, toy ny lafaoro mikraoba na fiara, izany hoe, ny hany iahiany dia ny miasa sy manao izay tokony hataony, ka manadino ny "mianatra", "miara-miasa", sns., ka tsara kokoa ny mizatra amin'ny toe-javatra toy izany raha tsy misy mahatonga antsika ra ratsy. Etsy andaniny, io volan'ny mpampiasa io (maro an'isa) no mandrisika ny fampandrosoana ny "fampiasa" ny rafitra, ny fitaovana sns .. satria voatery manadio ny interface-n'ny mpampiasa ny mpanamboatra, mahatonga azy ireo hahay kokoa, hanamora ny dingana, sns. , amin'izany dia mandray anjara ankolaka amin'ny fampandrosoana ny SL. Raha misy misalasala an'io dia jereo ny fivoaran'ny Firefox sy Android, miaraka amin'ny fizarana tsena lehibe azo, azo avy amin'ireo mpampiasa an-tapitrisany heverina ho "tsy misy ilana" azy ireo.
Misy ohabolana tranainy iray izay azontsika ampiharina manoloana an'io toe-javatra io, izay milaza hoe: "Raha tsy dia mahomby firy, farafaharatsiny dia ohatra ratsy"
Lahatsoratra tena tsara, KZKG ^ Gaara.
Izaho manokana dia manaiky tanteraka an'i Charlie-Brown.
Manaiky aho fa ny ankamaroan'ny mpampiasa dia tsy miraharaha firy ny fiasan'ny rindrambaiko. Betsaka ny olona izay, ohatra, tsy hanavaka Android amin'ny Firefox OS raha toa ka samy manana WhatsApp. Ho azy ireo dia ho tsara tarehy bebe kokoa na latsaka fotsiny. Ratsy ve izany? Arakaraka.
Amin'ny lafiny iray, eo ambanin'ny maodelim-pampandrosoana rindrambaiko maimaimpoana izay anaovana tatitra ny bibikely avy amin'ireo mpampiasa, ary koa ny fahafahany mamantatra azy ireo, dia loharano tena sarobidy hanatsarana ilay rindrambaiko voalaza, eny. Na izany aza, ndao apetraka amin'ny fomba fijery ity: rehefa simba ny vata fampangatsiahana anao dia firy ny olona manapa-kevitra hianatra momba ny fiasan'izy ireo ary manandrana manamboatra azy irery? Antsoina ny manam-pahaizana ary amboariny ho antsika izany. Faran'ny tantara. Mampalahelo fa amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika dia miasa toy izao izahay ary iray hafa ny rindrambaiko. Ny rindrambaiko maimaimpoana dia manandrana manova izany toe-tsaina izany fa tsy ny rehetra no tapa-kevitra ny hanaiky izany.
Etsy an-danin'izany, manana ohatra amin'ny distro "mahasoa ny mpampiasa" marobe isika izay ny tanjony dia ny hitondra ny GNU / Linux hanakaiky ireo olona tsy dia za-draharaha, na izay tsy te hianatra ny fomba fiasan'izany rehetra izany ary te hanana OS ho azy ireo. Mamela anao hifandray amin'ny Facebook, hanokatra antontan-taratasy momba ny birao ary hijery Internet. Distros toy ny * buntu, LinuxMint, Manjaro, sns. mitady ny hanolotra izany izy ireo, ary ny mpampiasa azy ireo dia mitady ny isan'ny mpampiasa betsaka indrindra ankoatry ny fampiasana matetika ny GNU / Linux.
Farafaharatsiny amin'ny zavatra niainako, ny fametrahana Xubuntu ho an'ny fianakaviako sy ny namako dia nanampy ahy haneho azy ireo ny fomba ahafahan'ny solosaina taloha miverina amin'ny fiainana ary manome azy ireo fahafinaretana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny PC. Ianao ve mila cheat terminal? Tsia ary raha mila azy ireo ianao, faly aho manampy anao ary manazava ny zavatra ataoko. Izay manatsara ny kalitao amin'ny maha-mpampiasa ahy ambany.
Na izany na tsy izany, araka ny mahazatra, mieritreritra aho fa manaiky isika rehetra fa ny fahalalahana dia mitaky andraikitra izay tsy eken'ny rehetra. Ary izany no zava-misy amin'ny lafiny maro amin'ny fiainana.
Miombon-kevitra tanteraka amin'ny anao sy i Charlie. Niala teo am-bavako ireo teny.
Manual MDN dia hoy izy:
Nampiasa ny GNU / Linux sy BSD nandritra ny 4 taona aho, nandalo ubuntu, opensuse, fedora, FreeBSD ary nijanona niaraka tamin'i Kubuntu tamin'ny farany, tsy mbola nanome na inona na inona ho an'ny fiarahamonina aho, tsy misy ilana azy Misaotra ...
Valiny tamin'i Manuel MDN
Betsaka ny fomba fandraisana anjara, toy ny fandefasana sosokevitra hanatsarana zavatra iray na hafa. Na izany na tsy izany.
FRANTSAY dia hoy izy:
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho KZKG ^ Gaara, aleoko vondrom-piarahamonina "kely", na dia tsy kely aza izy io, noho ny mpampiasa maro izay tsy manome fotsiny (izay azoko tsara raha tsy manam-pahalalana izy ireo), fa angatahina koa ny fanompoana nefa tsy mamaky na mitady zavatra hafa eo aloha, ary etsy ambony misy fangatahana.
Valiny tamin'i Francsico
Ry mpiara-miasa, tsy azonao atao ny miseho ho toa anao ny olona rehetra, na izay rehetra mampiasa Linux dia manana fahalalana mandroso, ary afaka manome anao antony roa aho:
1- Ny zava-misy fa mampifaly antsika ny GNU / Linux, mamporisika antsika hianatra sy hahazo fahalalana bebe kokoa, dia zavatra iray sarobidy amiko sy ianao, fa ny ambiny kosa tsy mila izany. Araka ny nolazain'i Charlie Brown tamin'ny heviny, ho an'ny ankamaroan'ny solosaina dia tsy fitaovana hafa fa fitaovana tokony handeha fotsiny ary dia izay.
2- Tsy azonao atao ny miseho ho tia ny tianao daholo ny olona. Heverinao ho toy izany no tianao indrindra, fa diso ianao. Miankina amin'ny fomba fijerin'ny tsirairay izany. Te hanana vondrom-piarahamonin'ny mpihira Salsa hitsikera anao ve ianao na hilaza fa tsy olona "manana kalitao" ianao satria tsy mihaino ny mozikan'izy ireo? Toy izany koa.
Ny tiana holazaina dia, raha manantena isika fa tsy hanana afa-tsy mpampiasa "Quality" dia tsy hanome zavatra kely momba izany ireo mpanamboatra. Ny tadiavin'izy ireo dia ny "Quantity" hahafahan'izy ireo mivarotra bebe kokoa.
Tsy afaka hahomby kokoa ianao, @elav. Ny marina dia, tian'ny mpanamboatra entana ny tombokase maitso Benjamin Franklin amin'ny fivarotana bebe kokoa.
Ary na dia maro aza no tsy tia GNU / Linux, dia noho ny antony tsy fantatry ny maro amintsika izany. Ny marina dia izao tontolo izao misy rindrambaiko maimaimpoana dia tena tsara fa feno olona tena manana ny tiany ianao, ary na izany aza, misokatra kokoa noho ireo izay mampiasa OS hafa toa OSX sy / na Windows.
Ary teny an-dalana, eto aho dia manolotra tranga tena mahavariana fa ny fampiasana pedantry an'ny mpitsikera tsy fantatra anarana izay miafina ao ambadiky ny anarana miafina amin'ny Internet >>
Indro misy. Miala tsiny raha tsy nivoaka ilay "rakikira pikantsary" fa izany no tranga farany hitako.
Efa napetrako tamin'ny nerd izay miantso ny tenany hoe Win .. http://i.imgur.com/lpT6NKj.png
mipoaka, epic HAHAHAAJ
Mampalahelo fa voafafa tao anaty sanitamen izy io. Toa ny admin FayerWayer izay mitantana ny hevitr'i Disqus dia tia ilay lahateny.
Toy izany koa, tamin'ny fampiasana alias hafa ananako ao amin'ny Disqus, dia nanome valiny aho mampiseho fa biby tanteraka izy rehefa mamaky hevitra mahatsikaiky. Na izany na tsy izany, manome ahy ny fiheverana fa miafina ao ambadiky ny tsiambaratelo i Laura Bozzo hanaparitaka areti-mandringana na aiza na aiza.
Eny, antonony ny hevitra, angamba tsy nankatoavin'izy ireo izany ..
Amin'ny tongolo lay sy tongolo no mamafa azy ireo avy hatrany.
Tsy izany no antony, Eliot, satria efa naneho hevitra tao ihany koa aho (manipy betsaka an'i Apple aho, ary fantatry ny besinimaro hoe inona no zazalahy mpankafy azy ireo ao amin'ny FW, na ny admin na ny mpampiasa maro), ary tsy nofafany ireo hevitra ireo.
Mino aho, ary manantitrantitra ny MINO, fa noho ny fampiasana ny teny hoe "manadala" no nitana io fanehoankevitra io ho antonony ... na dia Disqus aza dia tsy ho gaga aho raha noho ny fampiasana ilay teny hoe " Taliban "xD
O ry virijiny .. tena, ilay filan-dratsy hahaha nandao ahy ..
Eny, izay tondroin'i @DanielC dia ny fomba fanehoana izany valiny izany Fitantanana avy amin'i Perkele. Azoko sary an-tsaina @Tina Toledo miaraka amin'ny toriteny tsara izay mahatonga antsika hahita antony.
Ary teny an-dalana, ny lavaka farany.
Raha tokony ho salsa dia tokony napetrakao i reggaeton hampifanaraka ny lelafo: p Ny tena marina dia tena miombon-kevitra amin'izay lazainao aho +1.
Mikasika ilay lahatsoratra, heveriko fa ny kalitao sy ny habetsahana dia tsy foto-kevitra iadiana, raha ny marina, noho ny fivoaran'ny rindrambaiko maimaimpoana, heveriko fa ny habetsahana dia midika kalitao (farafaharatsiny miteny probabilistika). Salama.
Oad! manitsy ...
akony: = vita ary mamoaka raikitra 😛
Kalitao alohan'ny Quantity? Te ho sysadmin daholo ve ny mpampiasa linux? Eny, tonga lafatra nefa atombohy amin'ny fanesorana ny maody sary rehetra amin'ny solosainao.
Manaiky 100% aho. Tonga hatrany amin'ny teboka izay haiko efa ela ianao. Tsy raharahako fa manana mpampiasa maro ny GNU / Linux raha mbola eo ho antsika izay mankasitraka azy io ny mampiasa azy. Aleoko in'arivony hizara rafitra fandidiana amin'ireo mpampiasa manana ati-doha ampy hahafantarana izay ampiasainy na izay liana te hahafantatra azy. Tsy tiako ny mpampiasa fa rehefa lazainao azy ireo ny teny teknika voalohany dia mijery anao izy ireo toy ny hoe niala tamin'ny saosisy manidina ianao.
Heveriko fa indraindray adinonao tokoa fa ianareo mpampiasa matihanina, ireo manam-pahalalana .. sns .. sns .. sns .. no maro an'isa ..
Hadisoana lehibe !!
Nomeko an'i dada ny netbook taloha nataoko niaraka tamin'ny Fedora .. Ampiasako izany hijerena horonantsary sy hanaovana zavatra mahaliana azy ary ankehitriny .. tsy olona avy amin'ny sehatry ny IT izy (na dia mbola tanora aza izy ... dia nilaza tamiko izy fa dia iray amin'ireo nitam-piadiana Computaodras niaraka tamin'ireo rakitra na zavatra toa izany hahah xD)
Liana aho ary manome ampahany amin'ny fotoanako, ary efa nianatra zavatra betsaka aza, .. saingy mbola tsy mpampiasa aho izay lazaintsika miaraka amin'ny fahalalana ampy hanohanana ahy amin'izany rehetra izany .. ny marina dia miankina betsaka isika amin'izay ampianarin'ireo izay mpanao asa soa ..
izao dia namaky aho .. ny tanjon'ny tetikasa gnu / linux dia rafitra fiasa miasa sy maimaim-poana ..
ary izany tontolo izany dia ao amin'ny tontolo utopiana ..
fa tsy ny olon-drehetra no hahalala ary na izany aza tsy adidiny ny mahafantatra .. adidin'ny izay mahay mampianatra azy ireo izay azontsika atao ..
Na eo aza izany dia ilaina ny olona "manao baolina", arakaraka ny ahatongavantsika, arakaraka ny itohanan'ny orinasa ny fampiharana sasany toy ny mpamily izay ilaintsika fatratra, nefa manana disco izay miandraikitra ny fitondrana ny be sy ny maro amin'ny GNU sy izay ny Ubuntu, mampiasa Fedora aho fa ny miatrika mpampiasa ubuntu dia mandresy be
Luis Adrian Olvera Facio dia hoy izy:
Izany no hevi-dehibe fa maro no tonga.
Valiny tamin'i Luis Adrian Olvera Facio
Salama! KZKG ^ Gaara Miombon-kevitra aminao amin'ny ampahany aho, miaiky aho fa androany dia tena sariaka ny vondrom-piarahamonina Gnu / Linux ary manampy ny mpampiasa vaovao amin'ny fomba marina sy marina, tsy izany no mitranga amin'ny paoma sy microsoft, matetika aho mahita satria mampisavoritaka kokoa ny mpampiasa izy ireo fa tsy manampy ny zava-drehetra satria maneho hevitra tsy misy fototra izy ireo. Saingy raha tsy mifanaraka aminao aho dia amin'ny fotoana ilazako ireo mpampiasa sasany hoe tsy ilaina izy ireo, malalaka ny Gnu / Linux ary miaraka amin'ny hevitra fa azon'ny tsirairay ampiasaina izany ka izany no mahatonga ny fizarana maro hikatsaka ny hanao ny asany isaky ny mora sy bebe kokoa. intuitive, tsy maintsy mandefitra ianao satria angamba ho tonga ny mpampiasa tsy manam-pahalalana amin'ny solosaina, olona toa ireo rahalahintsika, renintsika, ray izay itondrantsika antsika amin'ity faritra ity fa tsy fantany ny maro amin'ireo teboka ary tsy izany no antony mahatonga azy ireo ho mpampiasa tsy ilaina, tongava ! tsotra toy ny hoe tiako ny lalao video fa tsy izany no antony tokony ho developer. Hajao ny namako.
Tutan_kbron dia hoy izy:
Mpampiasa Linux nandritra ny 7 taona mahery aho na angamba 8 taona, tsy mpandahatra programa, mpamorona na sysadmin, Linux fotsiny no ampiasaiko satria te hanadino ireo olan'ny virus teo amiko aho, ary ny tena tsy hitako ny fomba hanatanterahana azy koa. fiaraha-miasa amin'ny vondrom-piarahamonina raha ny olona mahay mandahatra programa na manana fahalalana teknika mandroso kokoa, dia tsy mihevitra akory izay azonao atao, ka mahatonga anao ho "mendrika hanome hevitra" na hanolotra zavatra satria olon-kafa dia hilaza aminao fa diso ianao. Ao amin'ireo forum dia notondroin'izy ireo ho "vaovao" "vaovao" sns ianao, satria tsy manana izany fahalalana ara-teknika izany amin'ny ambaratonga mitovy, afaka 8 taona dia tsy vaovao intsony aho, fa tsy nanokan-tena ho "hanapotika" ny rafitra.
Ohatra iray mazava, vaovao aho amin'ny fampiasana Manjaro ary amin'ny G + dia nitatitra / nanontany aho raha nisy olona nanana olana tamin'ny fametrahana ny kinova KDE satria rehefa nametraka azy aho, na dia nisintona ny iso KDE tamin'ny fanamarinana ny sha1sum sns aza (manizingizina aho fa tsy eo intsony. averiko indray, fantatro izay tokony hataoko), tamin'ny fotoana namerenako ny rafitra dia tsy KDE; XFCE napetraka !!!!! Ho ahy izany dia bibikely, na izany aza, tsy nisy nandinika ny hevitro, tsy nahazo valiny aho, nahatonga ahy tsy te-hitory na inona na inona amin'ny manaraka.
Mieritreritra aho fa tokony apetratsika io fieboeboana sy fanatisme io ary miverina amin'ireo fotoana nahafinaritra indrindra ny nidirana fantsona IRC, toerana nidiranao consultation ary nifanao namana ianao.
Mamaly an'i Tutan_kbron
Azafady fa tsy nandray anjara tamin'ny linux aho, nieritreritra aho fa ny fampiasana linux fotsiny dia mihoatra ny ampy
Tohil dia hoy izy:
Heveriko fa tena manokana fa tsy maintsy hamafisiko fa noho io karazana fomba fanamavoana ny mpampiasa iraisana io, ilay toa ahy dia tonga amin'ny Linux mitady vahaolana hafa nefa tsy manam-pahaizana momba io lohahevitra io dia fa esorina amin'ny fiarahamonina noho ny tahotra ny fahatsapana ho "adala" isika.
Ny tanjon'ny rafitra linux dia tsy tokony hamorona ivon'ny mpampiasa tena mahay sy be saina fa tokony hahatratra ny "moana" antsika indrindra.
Mamaly an'i Tohil
daniel2ac dia hoy izy:
Ny marina dia TSY manaiky aho, tsy azontsika atao ny mamela ny sisa amin'ireo mpampiasa amin'ny tontolon'ny tsy fahalalàny fotsiny satria tsy hanome zavatra "mahasoa" izy ireo.
Raha nisy zavatra tiako foana momba Linux, dia mandeha io! manao izay tokony hataony izy raha tsy "mamolavola" na mividy "rindranasa ifotony", ho ahy dia tsy resaka "tsiro" amin'ny hoe sehatra inona no tokony hampiasaina, fa ny rafitra miasa iza no tena mahay manao zavatra tsara. Tsy maninona na dia vitsy amintsika aza no hampiasa Linux raha toa ka rehefa mankany amin'ny orinasa hafa isika na amin'ilay supermarket iray ihany dia hitantsika fa nianjera ny rafitr'izy ireo satria izy ireo dia nampiasa izany fako microsoft izany, na ho ela na ho haingana dia misy fiantraikany amintsika rehetra amin'ny fomba iray. na hafa.
Tsy ny vitsy amintsika ihany no mankafy ny zavatra azon'ny Linux atao, fa isika REHETRA dia mahazo tombony amin'ny zavatra tena mandeha. Ka arakaraka ny habetsaky ny habe no tsara kokoa.
Mamaly an'i daniel2ac
Manao vazivazy ianao, sa tsy izany?
Inona no natao ho an'ny GNU Linux OS, mba hahafahan'ny tsirairay mahazo tombony amin'ny teknolojia tsaratsara kokoa sy ny fanandramana tsaratsara kokoa amin'ny fitaovany, na mba hisy "bug bug" sy "fiaraha-miasa"?
Tsy hoe mila "mpampiasa" na inona na inona ny Linux, mila olombelona ny fampiasana azy. Ary eny, ao anatin'izany ireo olona tsy manana rindrambaiko NPI na mampiasa console na koa mila, averiko indray, NA IZAO AZA.
Iza no hanapa-kevitra hoe "iza no mety ho mpampiasa linux"? Ianao KZKG ^ Gaara? Ary ho an'izay tsy afaka, inona? Hanjaitra kintana mavo amin'ny tratrany ve izy ireo?
Niara-niasa tamin'ny Linux aho ary nanantona namana, olom-pantatra ary olon-tsy fantatra momba ny fahafinaretana afaka mankafy, eny, mankafy SL. Ary avy eo dia mandeha manampy azy ireo hametraka distro aho ary manandrana manampy azy ireo amin'ny fisalasalany. Taona maro lasa izay ny hafa no nanao tamiko.
Ary tonga ianao izao hilaza amiko hametraka kintana mavo amin'ny tratran'ireo izay manana fomba ratsy na ireo izay tsy mahalala na tsy te hianatra na tsy te-ho mihoatra ny mpampiasa Linux Linux fotsiny?
Tsy manan-javatra hafa ankoatry ny Micro $ matetika na Apple…?
Andao hojerentsika raha mieritreritra zavatra mialoha isika alohan'ny hanoratana azy ireo, satria indraindray mety ahiana ny hamela fofona fasista izay hisintona hiverina.
Tsy haiko fa hafa no fahitako azy, ny fananganana ny duo Gnu / linux dia mitombo amin'ny fitaovana marobe, sarotra ny pigeonhole ao amin'ny birao sy ny fandraisana laptop, misy ny lalao, saingy ny ampihimamba, ny fampielezana hevitra ary ny fanatisme.
Fa maninona no maro no maniry mpampiasa PC (na OS) inona na inona no tadiaviko hanana fahaizana teknika manokana?
Misy ireo mpampiasa izay, na inona na inona antony dia mitombina io (na tsy azy ireo na tsy miraharaha izy ireo), tsy manana fahaizana mampiasa PC mihoatra ny fizahana, famoronana / fanovana antontan-taratasy, na fampiasana rindrambaiko izay miasa amin'ny varotra ataony izy ireo. Ary raha manana bibikely izy ireo, miaraka amin'ny fahatezerana izay maneho, dia mbola mitadiava fotoana hitaterana ilay bibikely fa tsy OS manana mpanangom-bokatra mitovy aminy hanao ny tatitra ho azy.
Na dia tsy tian'ny maro aza izany, ny informatika dia tsy dia ilaina loatra amin'ny fiainana noho ny mihinana. Azoko an-tsaina ny chef iray milaza fa mila mpahandro mahavariana bebe kokoa izay mandray anjara amin'ny fanaovana resipeo vaovao fa tsy ny mpihinana fotsiny izay manafatra ny lovia amin'ny fomba iray.
Manaiky aho fa ny kalitao dia tsara kokoa noho ny habetsahana, ary tsy mila mpampiasa miliara marobe mampiasa GNU / Linux izahay. Saingy tsy ekeko ny "antsasaky" amin'ny fomba fandinihana ireo mpampiasa izay tsy manome na inona na inona ho "mpampiasa tsy ilaina".
Tsy mieritreritra aho fa ny tontolon'ny rindrambaiko maimaim-poana dia tokony ho fifaninanana handraisana anjara betsaka araka izay tratra ary asio marika ny "sisa tsy ilaina." Mety misy ny olona mampiasa tsotra ny GNU / Linux ho an'ny orinasany manokana ary manararaotra ireo hatsaram-panahy omen'ity tontolo ity. Ary tsy voatery hoe ireo olona mametra ny tenany amin'ny fampiasana azy tsotra dia tokony ho ilay mavesatra mavesatra na "noobs" izay mitaky fanampiana amin'ny fomba ratsy ary tsy manelingelina ny famakiana boky torolàlana, fitsapana, fanandramana ary fianarana samirery. Tsy ny olona rehetra izay tsy mandray anjara na inona na inona dia "mpampiasa sisa" na "mahasosotra". Tiako ny mozika maimaimpoana, ary tsy hoe satria tsy mpitendry zavamaneno aho ary tsy manao na mizara ny mozikako manokana dia "mpampiasa tsy ilaina" amin'ny tontolon'ny mozika maimaimpoana aho ohatra.
Raha ny fahitako azy dia iray amin'ireo antony lehibe tsy tokony anànan'ny rindrambaiko maimai-poana (ankoatry ny antony tsara sy etika hafa) amin'ny maro an'isa ny mety hahavery ny etika sy ny kalitaony. Rehefa misy zavatra tsara "nanjary malaza" na nanjary zavatra "ho an'ny mpihaino rehetra" izay matetika mitranga matetika. Ohatra iray mazava ny amin'ny internet, izay miaraka amin'ny lamaody tambajotra asocial dia manjary tambajotram-pifosana sy horonana manokana tsy manome na inona na inona ary nahatonga antsika tsy hanana fiainana manokana, rehefa taona maro lasa izay dia nifantoka bebe kokoa tamin'ny fampahalalana sy atiny ilaina. Betsaka ihany koa ny olona midera an'i Android noho izy ireo lazaina ho "afaka" na dia fananana sy ara-barotra aza ny ankamaroan'ny zavatra natao. Tsy mila zavatra toa izany no mitranga amin'ny tontolon'ny GNU / Linux amin'ny ankapobeny afaka taona vitsivitsy.
Ary noho izany antony izany dia tany Diaspora aho *, satria rehefa be loatra ny Facebook, dia tsy mandeha intsony ny filaminam-bahoaka ENTIRE izay hitako fa tena tsy zaka.
Um, tsia, tsy ekeko mihitsy. Ireo izay "manahy ny hiara-miasa, manandrana mamaha ny olany, manandrana, manandrana, te hianatra" dia tsy midika hoe manana fomba amam-panao na tsy kamo izy ireo, na te ho maloto, na zavatra maro lazainao. Misy olona tsara sy ratsy eo amin'ireo "vao vao" sy "mandroso". Ohatra iray fotsiny no fantatrao fa ampy: forum an'ny olona efa zatra debian mandrara firenena iray manontolo (tsy fisian'ny fanajana), noho ny fitsaratsaram-poana sy ny hakamoana tsy te hahalala onony fotsiny. Ny kalitao no tadiavin'izy ireo fa tsy ny habetsany, saingy izany dia nahatonga azy ireo hanavakavaka ary hanavakavaka. Heveriko fa ireo zavatra ireo dia tsy maintsy hatsaraina amin'ny mpampiasa mandroso, satria tsy misy olona teraka mahalala, amin'ny fametrahana fanontaniana dia mianatra ianao, ary samy hafa tanteraka isika rehetra. mahafaly
Lohahevitra mahaliana sy sarotra.
Raha heverina fa ny rafitra miasa, na inona izany na inona, dia kasaina hampiasaina, tsy lojika ny mieritreritra mpampiasa vitsivitsy, na hiara-hiasa izy ireo na tsia.
Ny fiaraha-miasa sy ny fahalalana dia olana an-tsitrapo, ny olana iray hafa dia ny fitakiana, izay, tsy misy ankolafy.
Manao asa iray isika ary tsy misy manery antsika, marina fa indraindray takiana amintsika isika, toy ny hoe terena hamaha ny karazana olana rehetra isika.
Amin'ny ankapobeny, tsy tiako ny hevitry ny mpampiasa vitsivitsy, mampita ny fahatsapana fa sarotra ny GNU / Linux, lohahevitra tsy mahasoa, hevitra diso izay ezahinay holavina.
Tena mahaliana, mbola mieritreritra aho fa ny zavatra iray dia tsy mifanaraka amin'ny iray hafa ... amin'ny fomba fijery iray rehefa mangataka vahaolana ny iray dia mahazo azy nefa mamindra azy avy eo (ary hiteny ianao fa tsy matetika), manontany aho, ny fantsom-pifandraisana irery ve no post? sa ny internet ho generic kokoa?. Tsy misy koa ny rivotra na ny tena "vava", manatsara ny fiarahamonina izany? Mieritreritra be aho. Tokony hatsarantsika ny fanabeazan'ny mpampiasa (tsy resahina izany) Holazaiko fa ny fanabeazana ho an'ny mponina iray manontolo, saingy misy zavatra tsy azo esorina amin'ny fifantohana ary izany ny SOL no tena safidin'ny fanovana alohan'ny SOP izany hery izany amin'ny fitondran-tena maloto sy mifanohitra. Ny rafi-piasa misokatra / maimaim-poana izay miorina amin'ny kernel Linux (satria mino aho fa tsy nisy namorona kernel hafa) dia nametraka ny matrix ho firaisankina sy fahalalahana; Ny soatoavin'olombelona dia tsy esorina manoloana ny hafa, tsy medaly na amboara izy ireo, fa entelechie, lafin-javatra mameno antsika, mameno antsika izy ireo, izany no mahatonga antsika mihoatra ny fivorian'ny atomika tsotra izay mety ho namakafaka momba ny injeniera.
Araka ny nolazain'i Fito Paez:
ary tsy mijery azy
sy ny fomba fihetsika ».
(nahalasa ahy lava ny fisaintsainana hahahahaha)
SOL: Rafitra miasa maimaim-poana
SOP: Rafitra miasa amin'ny orinasa
Eny, ny tsy fahampian'ny fampahalalana sy ny fanabeazana no olana lehibe.
Hector Macias Ayala dia hoy izy:
Ianao no ohatra mahazatra amin'ny antony tsy itian'ny olona an'ity rafitra ity, tsy tsaraina na terena hanome zavatra ny mpampiasa.
Mampiseho ihany koa fa ianao dia iray amin'ireo olona izay mino ny tenany ho ambony noho izy mahafehy zavatra iray izay tsy omen'ny olon-kafa tohatra.
Valiny tamin'i Hector Macias Ayala
Etsy an-danin'izany, vita ratsy ny tranokalanao satria mampiasa Opera aho ary mamaritra azy io ho Chrome:
"Mozilla / 5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit / 537.36 (KHTML, toy ny Gecko) Chrome / 29.0.1547.76 Safari / 537.36 OPR / 16.0.1196.80"
Tsy maintsy mandray ny tapany farany ianao, ny mpandahatra programa toa tsy afaka miresaka momba ny kalitao.
Oad, mahatsiravina ahoana ny fahatongavana manafintohina nefa tsy manao veloma. Ka vita ratsy ilay tranonkala satria mampiasa Opera ianao ary manondro anao ho Chrome?
1- Inona no mahatonga anao hieritreritra fa ity tranonkala ity dia afaka manova ny Agent Agent anao?
2- Fantatrao ve fa mampiasa Chromium / Chrome ho toy ny fotony izao ny Opera? Eny, mahita ny hevitrao dia tsy hitako hoe fantatrao.
3- Ny plugin izay mampiseho ny fanamorianao no tsy noforoninay.
Fa koa, inona ny Agent Agent ampidirinao ao anaty hevitra? Adala ianao amin'ny tranokala rehetra, satria manana mpitety tranonkala 3 ao ianao: Chrome, Safari ary farany OPR. WTF
Aza miraharaha azy, indraindray dia mandray anjara ary amin'ny fotoana hafa tsy maninona ... Heveriko fa tsy manokana ireo toetra ireo.
Tsara ny Agent Agent. Ny zava-mitranga dia tsy eken'ny plugin izany User-mpandraharaha toy ny Opera, fa toa an'i Chrome.
Amin'ny pejy hafa toa Fitsapana HTML5 eken'izy ireo ho toy izany.
Pablo Destéfano dia hoy izy:
Misaotra Hector! Ianao no ohatra mahazatra an'ireo tsy mahalala fomba mahery setra. Avy amin'ny perla ny teny ao amin'ny Internet.
Valiny mahafinaritra Elav!
Valiny tamin'i Pablo Destéfano
Mahazatra an'i Hector ¬¬…
Marina tanteraka izany. Ao amin'ny html5tests.com, Opera 16 dia mamaritra azy ho ara-dalàna. Ny olana dia ny plug, marina tanteraka izany. Ao amin'ny html5tests.com, Opera 16 dia mamaritra azy ho ara-dalàna. Ny olana dia ny plug, marina tanteraka izany. Ao amin'ny html5tests.com, Opera 16 dia mamaritra azy ho ara-dalàna. Ny olana dia ny plug, marina tanteraka izany. Ao amin'ny html5tests.com, Opera 16 dia mamaritra azy ho ara-dalàna. Ny olana dia ny plugin.
Hahaha WTF Eliot?
Mitranga amiko izany rehefa manome hevitra avy amin'ny Opera Mobile aho.
Miverina amin'ny teboka, amin'ny HTML5 Test.com manondro ny Opera 16 toy izany. Ny olana dia eo amin'ny sehatry ny detection an'ny browser miankina amin'ny User-mpandraharaha.
Tsy nila natao ny nanamarina izany rehetra izany, jereo fotsiny ny fanariam-bolany solontenan'ny mpampiasa.
Eny, Chromium / Chrome dia mitovy amin'ny Opera 16 ihany, ny ampahany amin'ny OPR […]. Tsy dia misy ambara.
«Mila mampianatra ny olona handà ny fametrahana plug-in tsy maimaim-poana isika; mila mampianatra ny olona hikarakara bebe kokoa momba ny tombontsoany maharitra amin'ny fahalalahana isika fa tsy ny faniriany hijery toerana iray manokana. » Ary izany no lahasa, tsy ny fametrahana linux fotsiny amin'ireo izay mampiasa windows, fa ny mampianatra azy ireo (ary na ny manam-pahaizana linux aza satria maro no mbola tsy mahalala azy) fa izay atokana ho azy dia tsy ilay rafitra "mahafinaritra" sy milamina miasa , fa fahalalahana.
Vao mainka vao mainka mihomehy. Tsy maninona na manome zavatra ho an'ny fiarahamonina izy ireo na tsia, mieritreritra ve ianao fa ny ankamaroan'ny mpampiasa Windows dia manome zavatra ho an'ny fiarahamonina? …. nefa io no rafitra be mpampiasa indrindra izay manana ny fanohanan'ny mpamorona indrindra.
Azoko atao ny mampiasa ny rafitra amin'izay tadiaviko: asa, lalao… ..ary voila, tsy voatery hanana adidy hanome anjara na inona na inona aho izao, raha samy mandray anjara daholo isika rehetra, dia tsaratsara kokoa.
Arakaraka ny hamaroan'ny olona mampiasa linux no tsara kokoa ho an'ny rafitra satria ny orinasa, ohatra ny valizy sy ny setrony, dia handinika azy bebe kokoa.
Etsy andanin'izay, andeha hojerentsika raha manova ny rafitry ny fanehoan-kevitra ankehitriny isika satria PENOUS izany. Tokony hasehon'izy ireo amin'ny pejy iray ny zava-drehetra toy ny ataony amin'ny muylinux hanamorana ny fitetezana na hampiasa pagination toy ny amin'ny motera fikarohana. Ny rafitra ankehitriny dia fanaintainana amin'ny boriky rehefa be ny hevitra.
Manaiky ampahany amin'ny fidirana bilaogy aho, ny ampahany tsy ekeko dia ny hoe raha mpampiasa betsaka kokoa isika, na dia maro aza no tsy ilaina (ao no heveriko fa izaho, na dia manandrana mamaha ny olana aza) ireo mpampiasa ireo hanao tabataba bebe kokoa izy ireo ary maro ny mpamorona no "terena" amin'ny lafiny sasany handefasana ny fampiharana any linux
lecovi dia hoy izy:
Raha ny fahitako azy dia olana somary saro-pady ... Iza avy eo no mamaritra fa "kalitao" ny mpampiasa? Heveriko fa tena tsara ny fisian'ny mpampiasa rindrambaiko maimaimpoana. Heveriko fa arakaraky ny isan'ny mpampiasa no manatsara ny fiaraha-monina, angamba tsy izy rehetra no mandray anjara mavitrika. Fa arakaraky ny isan'ny mpampiasa no hitomboany ny filàna. Ary noho izany dia afaka manantena isika fa hidina tsikelikely amin'ny fanomezana ireo vahaolana ireo.
Marina fa ireo izay manantena ny hanana ny zavatra rehetra amin'ny lovia dia tsy dia ampiasaina firy, ary matetika no manota iray amin'ny maha "elitist" azy noho izy mpampiasa zavatra tsy fantatry ny maro.
Fa amiko dia toa manana fahalalahana mampiasa azy io ny olona iray, manana fisalasalana ary manontany. Ny hafa dia manana fahalalahana tsy mamaly fanontaniana.
Tsy toy ny mpanoratra, heveriko fa tsara kokoa noho izany. Farafaharatsiny raha ny momba ny Free Software.
Mamaly an'i lecovi
Ny rafitra miasa no fitaovana fa tsy ny farany. Ny mpampiasa tsotra dia mila mamokatra fotsiny, ary mba hisafidianana ireo safidy mahomby kokoa io, ary ao anatin'izany ny marika kiraro sahaza azy mifanaraka amin'izay OS ampiasainy amin'ny pc.
Heveriko fa tsy mety ny mino fa ny mpampiasa rehetra dia tokony hanome fahalalana vaovao ho an'ny fiarahamonina, satria ny ankamaroany dia mpampiasa fotsiny, fa tsy andevozin'ny teknolojia (toy ny ankamaroan'ny mpamaky ity bilaogy ity)
Mino aho fa ny zavatra tsara indrindra ho antsika rehetra dia ny fisian'ny maro amintsika kokoa na manao ahoana na mandray anjara na tsia. Tsy mifanaraka amin'ny hevitrao aho. ny olon-tsotra dia misy zavatra hafa tokony hatao. Aleoko ny dokotera mahay manasitrana ahy ary manampy azy amin'ny solosaina aho.
Maverick dia hoy izy:
Niara-niasa tamin'ny Linux nandritra ny 10 taona mahery aho, tsy mbola nanao fandraisana anjara ara-teknika na oviana na oviana, tsy mikasa ny hanao na inona na inona, ny tombontsoako hafa, ny Linux ho ahy dia fitaovana fotsiny. Na izany aza, resy lahatra aho fa ny tena fampiasana Linux dia efa fandraisana anjara,
Heveriko fa tsy misy ny mpampiasa sokajy faharoa na fahatelo na mahasoa sy tsy misy ilàna azy, araka ny soso-kevitrareo, mieritreritra aho fa toa anao, maro no samy manana ny tombotsoany ary fehiny, raha toa ka misy mpampiasa premium sy mahasoa toa anao fotsiny dia tsy hisy intsony ny linux misy mandritra ny fotoana lava, tokony hisaoranao ireo mpampiasa tsy misy ilana azy amin'ny fialan-tsasatrao na ny asanao
Valiny tamin'i Maverick
Tsy manana etika geek aho na dia mazoto amin'ny solosaina aza. Tsy nianatra fandaharana aho satria tiako ny manisy kaody fa noho izaho niditra amin'ny oniversite lasa injenieran'ny solosaina. Ankehitriny dia saika handray ny tenako aho ary mahafantatra zavatra maro izay tsy nanakana ahy tsy hahalala azy ireo, fa nianatra ihany aho. Ny fampiasana linux no iray tamin'ireo. Tena ampirisihina mafy aho ny hamolavola amin'ny fiteny maro izay lamaody …… .. saingy tsy manana bara hampivelatra aho, zavatra mipoitra tampoka avy any an-doha ary hitako fa ilaina ny midina miasa ary manome kely fanoloran-tena ho an'ny olona mba hahita izay azoko atao.
Raha mbola tsy manana ny spark aho dia mampivelatra vola satria vola no tiako.
Mmmhhh… Tsy dia be loatra, tsy dia izany. Ny mpampiasa dia zavatra iray, hafa ny troll. Mpampiasa bebe kokoa, milaza 5 tapitrisa? Eny. Ireo izay mampiasa GNU / Linux dia zatra tsikelikely amin'ny filozofia iray izay tsy maintsy zaraina ny fahalalana satria lovan'ny zanak'olombelona fa tsy an'ny orinasa. Miteraka synergy izany. Mila mahafantatra ny fomba fampiasana ny console ve izy ireo? Mwwweeee… Tsy haiko. Androany dia afaka manao SAFITRA amin'ny zava-drehetra avy amin'ny GUI ianao. Windows dia manana console, ary saika tsy misy mampiasa azy, tsy satria tsy ilaina izany, fa satria tsy fantany. Ary tsy maty izy ireo. Ary raha miasa matotra amin'ny Windows ianao, dia ho fantatrao kokoa ny fomba fampiasana ny console cmd, noho izany dia saika mitovy amin'ny an'ny GNU / Linux izahay. Mila mandray anjara ve ireo 5 tapitrisa ireo? Tsy diakona avokoa ny paroasy ao am-piangonana. Ny zava-dehibe amin'ny paroasy dia ny fahavononany, ary raha miara-miasa izy dia tsara kokoa.
Troll? Na aiza na aiza misy azy ireo; ireo, tsy mila olona.
Mazava ho azy, ohatrinona, satria raha maro ny mpampiasa dia hisy ny lalao bebe kokoa, programa momba ny fananana bebe kokoa (adobe, autocad, sns).
Miala tsiny aminao raha milaza aminao namana fa tsy hahatratra ny Linux ny Adobe sy ny autocad, farafaharatsiny afaka 10 taona na mahery vao hitranga izany.
Andramo i Gimp, Krita ho solon'ny Photoshop sy DraftSlight na LibreCad ho solon'ny librecad, izay ilainay dia ny manohana ireo mpamorona lozisialy malalaka kokoa, mitatitra bibikely na ara-bola mba hanomezan'izy ireo programa izay somary kely kokoa amin'ny haavon'ny tompony. .
Gaston_ dia hoy izy:
Salama, salama, ny fomba fijerinao dia toa hitako tena nitovy tamin'ny an'ireo fanam-paoma paoma miaraka amin'ny lohahevitra "exclusivité" na dia manana fototra aza ny anao Heveriko fa tsotra ilay zavatra, OS io ary namboarina mba hampiasan'ny olona azy. avy eo arakaraka ny hampiasan'ny olona tsara kokoa azy io ary raha betsaka ny olona mampiasa azy, dia misy vintana lehibe kokoa hampiasa izany ny mpampiasa "mahay" betsaka kokoa, fa ny rafitra iray izay tsy matevina dia maty fotsiny ary tavela ao aoriana, mahatadidy ny Symbian OS ho an'ny telefaona finday, fa ireo olona nolazainao ireo fa tsy manampy anay raha manao izany amin'ny fanomezana "publicité" toy ny ataon'ny mpampiasa rehetra, mandray anjara amin'ny fampitomboana ny rindrambaiko maimaimpoana toy ny nitranga tamin'ny android (mifototra amin'ny linux) amin'ny finday toa tsy vaky ny iOS fa ny maintso robot tonga ary nampipetraka azy noho ny fahafaha-mihetsika sy ny "habetsahan'ny" elatra misy ny terminal sy ny mpampiasa raha toa kosa i apple nilaza ny "exclusivity" nefa mbola OS ho an'ny finday manana kalitao ho ahy no tsara indrindra misy androany ary manatsara isan'andro isan'andro ankoatr'ireo mpampiasa "kamo" Raha antsoina amin'ny lahatsoranao ianao dia ampio izahay hahita ny fomba hanaovana ny rafitra ho intuitive kokoa satria tadidinay fa maro ny "matahotra" ilay fitaovana amin'ny alàlan'ny kitendry qwerty ary mikasika ny terminal amin'ny rafitra misokatra be, "matahotra" ny olona manao zavatra hanimba ny rafitra ary ny ankamaroan'ny lesoka dia ao amin'i Microsoft, satria amin'ny alàlan'ny fanaterana sehatra mihidy toy izany dia zatra ny mpampiasa tsy afaka manao na inona na inona aho ary ny fankanesana any dia tsy mora ho an'ireo izay avy amin'ny Windows, satria fantatray fa izy ireo no ny maro an'isa ary tsy milaza aminao akory ny mpampiasa Mac OS fa kely dia kely izy ireo, izany hoe, afaka manana kalitao sy habetsaka amin'ny fotoana iray isika, maso maro no mahita olana maro noho ny vitsivitsy
Mamaly an'i Gaston_
Tsy momba ny kalitao na ny habetsahana izany, fa ny mitazona tanjona mafy orina "Mivoatra ho mpampiasa"
Fony aho nihaona tamin'ny Linux dia mpampiasa Windows XP iray hafa fotsiny aho, tsy mahalala ny rindrambaiko maimaimpoana, na dia nahafantatra zavatra momba ny Opensourse aza aho, niara-niasa tamin'i Ubuntu, mpampiasa azy aho «Oh eny, manam-pahaizana vaovao feno fahendrena sy fahalalana lehibe toa an'i Dennis Ritchie »O izany no hevitr'izy ireo….
Tamin'ny filazako fotsiny ny teny toa ny Windows, Microsoft, Adobe, dia tonga feno izy ireo, nanipy ahy teny rehetra teny, nangataka fanampiana aho fa tsy ompa, nieritreritra aho fa toy izany daholo ny zava-drehetra ary niverina tany Windows aho.
Rehefa afaka volana vitsivitsy dia nasehon'ny rahalahiko ahy ny Linux Mint sy ny vondrom-piarahamoniny lehibe, eto misy fanontaniana sy valiny mahafinaritra ary fisakaizana lehibe, ny fahafaham-po lehibe indrindra dia rehefa manao zavatra irery ianao nefa tsy misy fanampiana ary tsy misy Google, na kely aza ny zavatra hitanao, mahatsiaro ho tsara ianao.
Androany dia tsikaritro fa ny mpankafy Stallman sasany dia toa mitahiry fankahalana na fahatsapana mitovy amin'izany ao an-tsainy sy ao am-pony ary mandany ny fotoanany amin'ny fitsikerana an'i Microsoft. Raha tokony hifantoka amin'izay mahaliana azy ireo ianao, Linux.
Noho ny olan'ity fiarahamonina Monopolized ity dia mila mahita solosaina Windows isan'andro aho, saingy mampiasa Linux ao an-trano aho ary manao zavatra tsara tsy misy olana, nianatra nanome lanja ny asan'ireo mpamorona maimaim-poana ho fananana aho, nefa tsy manana firy. mihoatra ny iray na ny rafitra hafa.
Hisy foana ny Linuxero izay mieritreritra fa Andriamanitra izy, izay tsy nampiasa zavatra mihoatra ny Win Xp, izay tsy nampiasa milirus mihitsy ary raha nanana izany dia natao handravahana sy nametraka barazy maro araka izay azony natao tao anaty «browser» ary ireo ihany no velona miandry Ny hetsik'i Microsoft.
Na ny olona mitsikera distros hafa tsy an-kijanona aza, ny namana Linux dia mizara, mankafy ary mahita, ny zava-dehibe dia miaina anaty tontolo mahafinaritra isika ary raha tsy te hijery ny tontolontsika ny tompony dia tsy azony izany.
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho. Ao an-trano, manana Dual Boot Windows Vista Ultimate SP2 miaraka amin'i Debian Wheezy 32-bit aho. Tsy manana olana amin'ny IE9 aho, fa ny marina dia zara raha manana izany ho an'ny haingon-trano ary mampiasa Chromium hivezivezy sy Firefox hanandramana ny fahombiazany amin'ny tranga ratsy indrindra.
Heveriko fa izany dia toy ny sekolim-panjakana tsotra "ilaina ve ny manamboatra sekoly ho an'ny olona TSY MAMokatra, IZA NO TSY MAHAY IZAO?"
ny fampianarana sy ny fianarana dia zavatra sarotra be nefa io no fototry ny zanak'olombelona.
Heveriko fa maika kely ianao. Amin'ny lafiny sasany, ho anao aho. Saingy amin'izao fotoana izao dia tsy mpandray anjara lehibe amin'ny Linux aho ary nampiasa azy manokana nandritra ny taona maro, na dia marina aza fa mizara izay rehetra fantatro amin'ny alàlan'ny forum. Saingy ohatra, vao haingana aho no nametraka ny distro Xubuntu ho an'ny namako ary tena tsy mandray anjara amin'ny lafiny rehetra izy, amin'izay tiako ho azo, vato iray vato no anaovantsika rindrina.
Eny mazava ho azy, tsy milaza aho fa tokony handray anjara daholo isika (na dia tokony hanome anjara na dia kely aza), fa kosa ny fomba itadiavan'ny mpampiasa vao haingana fanampiana.
Ary eny namana, vato iray vato no anaovantsika rindrina, fa hatraiza ny hamafin'ny rindrina raha osa ny vato? 🙂
Hatraiza ny fahitanao ny olona "mahasoa"? Mahasoa ve aho? Ny reniko izay tsy mampiasa afa-tsy ny PC amin'ny feisbu sy ny yutu, ilaina ve izany? Tokony hiverina any Windows ve isika satria tsy manome valiny ny fiaraha-monina?
Tsy ny olon-drehetra no afaka na te hivezivezy mandavaka ny rafitra, mamaky ny lehilahy, mitatitra bibikely (ity farany tokony ho mandeha ho azy raha manontany ahy ianao), sns.
Ny raikeliko, izay mody avy any am-piasana, dia misakafo ao anatin'ny 5 minitra, avy eo mankeny amin'ny mari-pahaizana master ary tonga amin'ny 10 alina. Te-hamaky momba ny rafitra ve izy? Mazava ho azy fa tsia, ho azy - sy ny ankamaroan'ny olona manerantany - ny solosaina dia fitaovana fotsiny toy ny finday, ny fahitalavitra, ny microwave, ary tena tsara izany.
farafaharatsiny tiako ny Quality noho ny Quantity, aleoko vitsivitsy ilaina kokoa noho ny maro… tsy ilaina.
Fa maninona no tsy izy roa?
100% mitovy hevitra aminao ry rahalahiko.
Tsy isika rehetra no manana faniriana na fotoana hitaterana bibikely na hiaraha-miasa amin'ny forum.
Ny fotoana kely nananako dia midika fa tsy mandray anjara amin'ny vondrona mpandika tenin'i Fedora aho, mainka fa ny fandefasana ny bilaogiko. 🙁
Tsy ny olon-drehetra no afaka manam-potoana hijerena lehilahy, hanaovana fikarohana ao amin'ny Google, fanandramana… ok marina, saingy afaka manam-potoana ho an'ny zavatra hafa ve izy ireo (toy ny fametrahana sary ao amin'ny Facebook) ary avy eo mitaky amin'ny forum fanohanana ny hafa hamaha ny olany? O_O
Ny tanjoko dia tsy ny hiady, fa ny hampahafantatra ny mpampiasa fa ny fahalalam-pomba matetika no mamaritra raha misy olon-kafa manampy anao na tsia. Ohatra, novakiako tamina forum iray ny fanontanian'ny mpampiasa iray, milaza ilay mpampiasa fa manana olany X izy, niezaka namaha izany tamin'ny fomba samy hafa nefa tsy nahomby, nilaza izy fa nitady an'i Google ary tsy afaka ihany koa, ao amin'ny ny farany dia nangataka fanampiana izy ary namela lozisialy… ANDRIAMANITRA, te-ho any an-tranony manokana aho, hamaha ny olana ary hanome azy ny nomeraon-telefaoniko ka isaky ny manana olana izy dia antsoy aho dia hanampy aho izy.
Mandritra izany fotoana izany, raha mahita mpampiasa hafa milaza aho fa manana olana X ... ary izay ilay izy, zero log, zero Google fikarohana, aotra ny zava-drehetra, ary koa ny fangatahana izay anampiany azy satria raha tsy izany dia mandao ny Linux izy, fantatrao ve izay mahatonga ahy maniry hanao an'io mpampiasa io? 😀
Eny, eny, mifanaraka amin'izany no ifanarahako tanteraka aminao.
Angamba ianao tsy nifidy teny mety amin'ilay lahatsoratra.
Marina, toa diso ny fandikanao ny iray amin'ireo hevitro tao amin'ny MuyLinux, zahao
Eny no nanamarihako azy, ny fialan-tsiny azoko noho ny tsy fahazoako hevitra 🙂
Iray amin'ireo fanamarihana donto indrindra novakiako. TSY heveriko fa mikendry ny hanangona rindrambaiko maimaimpoana fotsiny ny "handresy olona betsaka kokoa", na hitaterana bibikely, na izay rehetra nolazainao. Ny zava-dehibe momba ny rindrambaiko maimaimpoana dia ny fialan-tsasatra amin'ny ampihimamba, amin'ny fanararaotana, ary manolotra karazana fifandraisana tsy ara-barotra. Ary misy ifandraisany bebe kokoa amin'ny Linux.
Ny hevitro dia toa ahy, tsotra, iray amin'ireo mpampiasa linux marobe izay mino ny fahasoavan'Andriamanitra.
kiriko dia hoy izy:
Mamaly an'i kiriko
ha, mbola tsy hitako ireo hevitra ireo talohan'ny nanoratako. Rehefa namaky azy ireo aho, dia ... namaly ny fanontanianao. Eo an-dafin'ny fantsakana ianao (tsara vintana).
Raha ny fanazavana, tena tsara ny bilaogy! hehe
Eny, olana sarotra izany ary teo antenatenan'ny taonjato lasa dia nisy olona nieritreritra toy izany tany Alemana, tamin'ny farany dia nahazo tavy iray izy ireo.
Tsy azoko tsara ny fizarana ataonao, amin'ny zavatra rehetra dia hisy olona manam-pahalalana bebe kokoa ary ny hafa manana vitsy. Tsy manome lanja ambonimbony kokoa amin'ny iray izany na manimba ny hafa, dia izany tokoa.
Ny zava-misy fa misy tobim-pampiasa lehibe kokoa dia hanohana ny vokatry ny tamba-jotra noho ny Linux, ka hisy ny fandraisana anjara betsaka kokoa, ny mifanohitra amin'izay aza dia manana fisalasalana lehibe aho fa maro ny mpampiasa no manondro fangatahana maro kokoa, ny mifanohitra amin'izay no izy. mihoatra ny azo inoana fa bibikely maro no voavaha. Ny heveriko fa mety dia ny fizarana sasany miavaka amin'ny hafa amin'ny isan'ny mpampiasa, miaraka amin'ny olany no voavaha voalohany.
Ho santionany dia ho hitanao fa amin'ny faran'ny taona 2014, ny Steam OS dia anisan'ny OS 10 be mpampiasa indrindra ary anisan'ireo fizarana linux 5 napetraka indrindra.
Valiny amin'i RaF
Hitan'izy ireo ny fandefasana indray http://www.muylinux.com/2013/10/02/cuantos-mas-seamos-mejor/ ?
Mihevitra aho fa manana ampahany amin'ny antony ianao. Saingy ny isan'ny mpampiasa dia mety ho zava-dehibe ka, ohatra, afaka mifaninana amin'ireo endrika fananana izay mamorona fenitra ary koa ho an'ireo mpanamboatra fitaovana handinika ny Linux. Ho fampandrosoana ny rindrambaiko maimaimpoana mihitsy, araka ny fanazavanao tsara, "ny kalitao dia zava-dehibe kokoa noho ny" habetsahana. "
René Lopez dia hoy izy:
iiiaa Gaara, miomàna fa ny sasany amin'izy ireo dia efa nanomboka nandrehitra ny fanilo .. haha ​​..
Manadala fotsiny .. na dia misy valiny ao amin'ny Muy Linux aza: http://www.muylinux.com/2013/10/02/cuantos-mas-seamos-mejor/
Valiny tamin'i René López
Eny hitako… izay hovakiana amin'ireo fanehoan-kevitra ireo, LOL !!
Ity lahatsoratra ity dia toa ahy tsy misy dikany sy tia tena mihoatra noho izay antenaiko avy amin'ny mpampiasa Linux.
Ny fampiasana tsotra ny distro Linux dia efa anjara biriky iray, ny fampitomboana ny isan'ny mpampiasa dia mila fanohanana bebe kokoa avy amin'ireo mpanamboatra, ary izahay dia tsy misimisy loatra amin'izany. Linux, eo amin'ny birao, mbola lavo ihany, ny zavatra tsy tokony hamaivanina ny fanampiana azon'ny mpanamboatra omena.
Menatra aho amin'ity lahatsoratra ity.
Ny fampiasana tsotra dia tsy fandraisana anjara, satria tsy mitondra na inona na inona ho an'iza na iza afa-tsy ianao. Tsy niankina tamin'ny fanohanan'ny mpanamboatra mihitsy ny Linux ary tsy tokony hiankina velively izany satria ny fiankinan-doha dia mametraka loza amin'ny fahalalahana, tsy haiko hoe aiza no latsaka ambany araka ny filazanao, amiko dia lava loatra ny tombony azo amin'ny hafa.
tsy mandray anjara mihitsy? mankanesa any amin'ny popcon.debian.org popcon.ubuntu.com ary jereo ny fomba fitaomana antontan'isa tsotra nomen'ny "mpampiasa" izay fonosana napetraka tsy misy fangarony, toy ny baiko harahin'izy ireo amin'ny CD / DVD. I Debian dia tsy manaraka mpitondra miaraka amin'ny fanapaha-kevitra farany toa an'i Ubuntu (nanapa-kevitra ny hampiasa firaisankina sy bokotra ankavia satria izy no tompony), mila mpampiasa ny handray fanapahan-kevitra.
Mikasika ilay lahatsoratra:
Amin'ny farany dia toa tadiavinao ny hisian'ny mpampiasa "mahasoa" kokoa, na an'ny an'ny sangany izany. Ka ndao hikatona ny zava-drehetra, maninona isika no manao fety fametrahana SL raha tsy hampiely ny besinimaro? Angamba ireo mpampiasa izay tonga dia tsy mandray anjara mavitrika (na miverina amin'ny varavarankeliny), saingy tsy nisy nanery azy ireo ho tonga, liana te hianatra izy ireo ary ao anatin'io vondrona io dia mety misy olona iray izay nanokafananao ny masony sy nanandratanao ny feon'ny fieritreretany, Ary iza no mahalala, indray andro any dia hisy i Stallman manaraka (Icaza no fampanantenany, tsy fantatro izay nanjo azy). Ny zava-misy fa ny olona iray an-tsitrapo (ary nandrakitra an-tsoratra ny varavarankely tamin'ny fahazazany) dia nanapa-kevitra ny hanana fahalianana amin'ny Linux / GNU / SL dia toa mahatalanjona amiko. Mahavariana satria eo amin'ireo mpampiasa PC dia misy olona maro izay tsy mahalala akory izay tena windows.
"Tsy fantatro hoe aiza no latsaka ambany araka ny teninao, ho ahy ny halaviran'ny tombony izay mitondra mankany amin'ny hafa dia lava loatra"
Amin'ny rindranasa angamba?
Andao hatrehana izany, Linux amin'ny maha OS azy dia tsara lavitra noho Windows sy OS X fa tsy misy fampiharana, maro ho an'ny Linux no tena mamokatra amin'ny tontolon'ny birao ho an'ny mpampiasa sy ny orinasa tsy miankina.
Ny zava-mitranga dia misy vitsy an'isa mino ny tenany ho Andriamanitra noho ny fampiasana Linux fotsiny, ary mankahala ny olona tsy manam-pahalalana hampiasa an'io OS io, satria ho lany ny exclusivité-ny.
Betsaka ny olona maniry OS isan'andro isan'andro, na inona na inona lafiny ara-teknika, hitako fa tsy mampino fa mandresy ny fahalalahan'ny rindrambaiko ianao ary avy eo mamepetra ny fahalalahan'ny mpampiasa hanapa-kevitra amin'izay OS hampiasainy.
Miala tsiny amin'ny Top-Topic, fa toa nanao bandy Requiem ireo tovolahy ao amin'ny FayerWayer 30 taona teo ho eo >> http://www.fayerwayer.com/2013/10/gnu-y-su-influencia-en-los-ultimos-30-anos/
Tsy fangatahana izany fa fitantarana ny tantaram-piainana GNU izay velona kokoa noho ny hatramin'izay.
Rehefa nilaza aho hoe Requiem dia ny tranokala no tiako holazaina. Velona kokoa noho ny taloha ny GNU (na dia talibanendo aza).
Toa ahy ny milaza fa "maninona no misy mpampiasa an-tapitrisany tsy miara-miasa" dia fomba fanavakavahana. Azoko tsara ny fomba fijerinao, satria maro ny mpamorona namoaka ny kaody mba hanatsarana ny tsirairay, fa ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa ny PC ho fitaovana miasa na fialam-boly.
Etsy ankilany, mety ho fotoana iray ho an'ireo izay mahalala tsara ny rafitra izany, hanana orinasa amin'ny maha teknisianina azy, satria misy neophyte solosaina mety tsy mahalala ny fametrahana programa, mampiasa azy na mamaha olana.
Ho fanampin'izay, hisy hatrany ireo mpampiasa te-hiara-hiasa amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa tahaka ny fanaony hatramin'izay.
Ho ahy, azoko lazaina fa tena afa-po amin'ny rafitra aho ary indrindra amin'ny hevitra ao ambadiky ny Free Software. Zavatra tokony hampahafantarina izany
na firy na firy ny isan'ny mpampiasa, fa tsy isalasalana fa ny fitomboana lehibe dia manatsara ny olan'ny fitaovana.
Ny lesoka fototra voalohany ao amin'ny lahatsoratra dia ny mieritreritra fa ny mpampiasa dia tokony ho zavatra mihoatra izany.
Mividy vokatra ny mpampiasa, ka mahasoa ho azy izany, ary manampy azy hanao ny asa kasaina hatao.
Ary hoy aho hoe "mividy" tsara, na dia 0 aza ny vidiny.
Ny olana iray hafa dia ny fampidirana ireo rafitra miasa miaraka amin'ilay masinina ary tsy avela hisafidy azy ireo isika.
Mieritreritra marina aho ary tsy mikasa ny hanafintohina fa tsy nahatakatra na inona na inona momba ny rindrambaiko maimaimpoana ianao.
Azavao aminay azafady.
hahaha… inona no valiny! ny ankamaroan'ny tsikera fotsiny! tsy miovaova kely! Angamba ny famakiana ireo hevitra dia afaka mahazo hevitra ianao. Raha tsy izany, afaka manaraka ny motera fikarohana ianao, aorian'ny fanarahana ny naoty.
Andao, samy manana ny heviny ny tsirairay, fa ny tena zava-dehibe, ny famakiana rindrambaiko maimaimpoana dia namela mihoatra noho ny fikorontanana. Toa ny hany azon'izy ireo maimaimpoana dia ny "fampiasana maro", nefa tsy hitako, araka ny nolazaiko teo aloha, ny dikan'izany.
Tsy mila manazava na inona na inona ianao. Ato amin'ity bilaogy ity dia efa nohazavain'izy ireo tsara izany, imbetsaka, tsy haiko hoe maninona ny mpiara-dia KZKG ^ Gaara no hivoaka miaraka amin'ny fomba adaladala sy tsy marina.
Soa ihany fa tsy nampiasa Management of Perkele izy.
Ny fahitako azy dia tsy adala mihintsy, fa angamba tsy nohazavaiko tsara ny momba ahy na tsy azoko ny nolazaiko.
Araka ny nolazaiko tao amin'ny hevitra iray hafa etsy ambany:
Raha ny marina, ny hevitra dia ny hanomezana betsaka araka izay tratry ny tsirairay, ny 'ratsy' na ny 'fitsikerana' ahy dia tarihina (raha tianao ny hahita izany) amin'ireo mpampiasa izay mahazo aina (vao na tsia) dia aleon'izy ireo manontany na iza na iza ary mitaky ny hamahan'izy ireo ny olany dia aleon'izy ireo manao izany fa tsy manandrana mamaha ny olana.
Heveriko fa ny fananganana linux sy fampitomboana azy amin'ny maha-vondrom-piarahamonina anao dia zava-dehibe ihany koa ary ilaina ny fitomboana
tsara ny mino olona izay mihevitra fa toetran'ny anime izy ...
Heveriko fa ny fahasamihafana dia 1.000.000 mihoatra ny 1.000 latsaka.
Ny hevitra dia ny fandraisana anjara amin'izay ilain'ny tsirairay, mpampiasa mahazatra ny rafitra aho satria mankaleo mandoa fahazoan-dàlana (na dia mbola tsy nanao izany aza) noho ny zavatra hitako maimaimpoana tany an-kafa ...
fanajana bebe kokoa amin'ireo mpampiasa vaovao an'ny rafitra, satria izy ireo ihany no mitady ilay zavatra notadiavinao taloha. satria tsy mino aho fa nampiasa linux foana ianao, raha nandalina fitantanana tambajotra ianao dia tokony natomboka tamin'ny windows server.
Ary heveriko fa tsy nisy olona nilaza taminao fa tsy tokony hifindra amin'ny Linux ianao, satria aleon'izy ireo mandray anjara.
Mino olona izay "mino" toetra amam-panahy?
Ka mieritreritra ianao hoe clown noho ny avatar anao? 0_oU
Raha ny marina, tsy nianatra momba ny fitantanana tambajotran aho ary tsy nanokana zavatra manokana tao amin'ny oniversite, lavitra azy, ny zavatra fantatro rehetra nianarako tamin'ny famakiana, ny olona, ​​ny lahatsoratra amin'ny Espaniôla sy Anglisy, fanandramana ary ambonin'izany rehetra izany, fiezahana manamboatra ny ny olako dia izao no ianaranao, sa holazainao amiko fa diso aho?
Tiako ilay lahatsoratra, raha ny momba ny fanontaniana fidiko amin'ny feon'ny fieritreretana, ilaina ny mpampiasa saina ny fihetsik'izy ireo, ny tsy ilaintsika dia "mpanjifa" tsotra izay te hahazo potochop sy ofisialy.
Ny tsy fahatsiarovan-tena fantatro fa nametraka zavatra mahafinaritra be dia be ary ny fanovana ny GNU ho android dia tsy zavatra tiako ho hita
"Ilaina ny mpampiasa mahatsapa ny fihetsik'izy ireo"
Betsaka na latsaka no mandeha ilay zavatra.
Jaime Neuhaus F. dia hoy izy:
Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mampiasa ny PC amin'ny fiainana andavanandro: mandefa mailaka, manoratra zavatra, manaova kaonty sasany, mihaino mozika, mijery horonan-tsary, mandray anjara amin'ny tambajotra sosialy, sns. Ary raha miasa amin'izany ny PC-nao dia tsy miraharaha ny OS ianao ary azo antoka fa tsy hitady "bug" ianao .. .. Etsy andaniny, raha ny OS ampiasainao dia Linux, tiavo fa azo antoka kokoa ny PC anao, azo antoka kokoa, azo ovaina kokoa (?), sns, ny saina bebe kokoa no homen'ny mpanamboatra fitaovana hanomezana fahafaham-po ny filan'ny tsena lehibe kokoa.
Valiny tamin'i Jaime Neuhaus F.
@ KZKG ^ Gaara: «Quantity na kalitao…. Izay no fanontaniana! … inona ny hevitrao?".
Ny eritreritro dia ny tsy tokony hisotro kafe be alohan'ny hanoratanao lahatsoratra. Alao an-tsaina hoe ny hafatrao dia "tongasoa" amin'ny pejin'ny fizarana rehetra. Tsy misy olona hampiasa Linux aorian'ny famakiany an'io, satria mitovy bebe kokoa amin'ny hoe "Raha tsy mahalala na manam-potoana hianarana ianao dia aza apetraka ity OS ity". Ny marina dia raha te-hijery mpampiasa kamo kamo ianao, ilay karazana manana rantsan-tànana mavesatra hampiasana ny motera fikarohana, dia niatrika ilay fanontaniana tamin'ny fomba somary tsy mahafinaritra ianao.
Tsy misy zavatra manokana ok? Fa tsy miombon-kevitra tanteraka amin'ny hevitrao aho.
Araka ny efa nolazaiko teo aloha dia aza manahy fa tsy misy zavatra mitranga. Tsy manaiky ianao, ary manana ny zonao rehetra.
Haveriko izay nolazaiko tamin'ny hevitra iray hafa:
Ny hevitra dia ny fandraisana anjara amin'izay azon'ny tsirairay atao, ny 'ratsy' na ny 'fitsikerana' ahy dia tarihina (raha tianao ny hahita izany) amin'ireo mpampiasa izay (vao manomboka na tsia) dia aleony manontany an'iza ary mangataka ny hamahan'izy ireo ny olany (ny style "mitsoka linux, raha tsy manampy ahy izy ireo dia miverina amin'ny varavarankely aho"), aleon'izy ireo manao izany toy izay manandrana mamaha ny olana samirery.
Mbola mankasitraka anao aho Lol. Miezaha fotsiny hametraka olombelona kely amin'ireo karazana lahatsoratra ireo. Fantatro ianao, imbetsaka aho no nandefa mpampiasa marobe tany amin'ny Google, saingy nanandrana aho ary nanandrana - sarotra indraindray satria indraindray matevina izy ireo - hanao izany amin'ny fomba mety indrindra.
Indraindray ny mahaolombelona dia tsy ny hatsaram-panahiko lehibe hahahaha, miaina amin'ny firenena aho indraindray mety ho lasa supervillain (miaraka amin'ny fitaovana ilaina) ary manandrana manimba an'izao tontolo izao HAHAHAHAHA.
Amin'ny lafiny vazivazy dia mbola manandrana manampy ny mpampiasa aho, na vaovao izy ireo na tsia (andriamanitra, miaraka amin'ny elav sy ny namana hafa dia izahay no mpitarika ny hetsika SWL any Kiobà!), Fa samy kamo, mitaky, tsy mahalala fomba ary na dia mpampiasa tsy mahalala fomba aza matetika andramo ny faharetantsika 🙂
Ny hoe mangataka ny famahana ny olany ny mpampiasa iray, manome azy hieritreritra. Manana na mino izy ireo fa manan-jo TSY hanana an'io olana io. Ary amin'ny ampahany angamba dia marina ny azy ireo FA tsy misy fiantohana ireo distros toa ny SL rehetra ... Amin'izay tsy tokony hanahiran'ny olona iray mitaky zavatra ianao, ampitainy amin'ny lisansa rindrambaiko maimaim-poana izay eken'izy ireo rehefa mampiasa ilay rindrambaiko. .
Ny "olana" (raha azo antsoina hoe izy) dia ny fangatahan'ny mpampiasa fanampiana, mangataka ny hafa hamaha ny olany (matetika vokatry ny tsy fahalalana) ary raha tsy afaka manampy azy izy (na tsy haingana araka izay itiavany azy) , avy eo mandehandeha milaza fa fako sns sns sns ny Linux.
Raul Torres dia hoy izy:
Manaiky aho ary izaho dia olona vao miditra amin'ny tontolon'ny Linux. Ny marina dia tsy mandray anjara firy (na tsy misy na inona na inona) fa te hianatra bebe kokoa handray anjara. Ny ataoko dia ny mikaroka ny net ary manontany ireo olom-pantatra izay mahalala bebe kokoa. Marina ihany koa ny fomban'ny sasany amin'ny forum.
Valiny tamin'i Raúl Torres
Misaotra anao tamin'ny hevitrao.
Eny tokoa, tsy anti-rookie aho na amin'ny fomba inona na inona, raha ny marina dia izaho no voalohany manandrana mametraka ny tenako amin'ny kiraron'ny mpampiasa vao vao afaka manampy azy tsara kokoa, izany ihany no olana, ny fomban'ny sasany amin'ny forum diso fanantenana tokoa
Averina indray, misaotra betsaka anao tamin'ny hevitrao.
Toa tsy mampino ahy izay vao novakiako ... ary mampino kokoa fa ny mpitantana iray amin'ireo tranonkala miteny espaniola be mpijery dia maneho amin'ny fomba Leninista toy izany, ny tokony ho mpampiasa ny rafitra miasa ... inona no holazaina ianao izay tsy nilazany taminao ... tsotra fotsiny fa mpampiasa vaovao sy mahazatra aho, tsy misy fahalalana teknika, ary tsy hijanona amin'ny maha mpampiasa linux ahy aho satria sahirana amin'ny fanontanian'ireo mpampiasa toa ahy ianao, fa aza manahy , satria amin'izay nosoratan'ny maro taminay, mpampiasa tsy za-draharaha eo imasonao, hijanona tsy hijanona manodidina an'ity izahay, ny tranokalano ... Avelako tip anao, satria tsy mandinika ireo mpampiasa te hisoratra anarana ianao, amin'izay. azonao antoka fa hifanerasera amin'ireo mpampiasa amin'ny haavonao ianao, afaka manampy anao ity pejy ity ka hisoratra anarana izay mankato azy http://www.daypo.com/test-gnu-linux-2007.html Fiainana tsara Andriamatoa KZKG ^ Gaara.
Raha tafintohina ianao na dia tsy nanonona anao manokana aza aho, miankina aminao izany. Raha ankoatr'izay dia tafintohina ianao satria tsy hainao ny mandika tsara izay nolazaiko (na tsy nataoko izay hahatakarako ny tenako), tsara ...
Tsy nisy fotoana nilazako hoe tsy maintsy hosedraina ny mpampiasa vaovao tsirairay, lavitra azy io, hevitra adaladala O_O ... tsy manana na inona na inona koa aho, averiko ihany, TSY MISY amin'ireo mpampiasa vaovao:
Ny hevitra dia ny fandraisana anjara betsaka araka izay azon'ny tsirairay atao, ny 'ratsy' na ny 'fitsikerana' ahy dia tarihina (raha tianao ny hahita izany) amin'ireo mpampiasa izay (vao manomboka na tsia) dia aleony manontany an'iza na iza ary mitaky izany. mamaha ny olany izy ireo ("mitroka ny linux, raha tsy manampy ahy izy ireo dia hiverina amin'ny varavarankely"), aleon'izy ireo manao izany toy izay manandrana mamaha ny olana.
Toy izany koa, na te-hijanona tsy hamaky ity tranokala ity ianao na tsia, fanapahan-kevitrao io, fanontaniana iray ihany no hapetrako aminao, efa namaky fampianarana na lahatsoratra nataoko hafa ve ianao?
Manoro hevitra anao aho handinika ireo lahatsoratra nosoratako, ary avy eo dia holazainao amiko raha anti-novice aho na tsia ... ¬_¬
Andao hojerentsika raha afaka manao ny tantara an-troll ao amin'ny forum aho (raha apetrako ao amin'ny bilaogy izany dia mety hisy afo mirehitra).
Toa ahy araka ny nolazain'izy ireo teo aloha, fa tsy dia voalaza loatra ilay lahatsoratra, ary kely kokoa raha toa ka miseho eo amin'ny toerana voalohany amin'ireo tranonkala miresaka momba ny linux izy io. Efa nandramako ny Linux hatramin'ny 2009, nanomboka tamin'ny Mandriva aho. Nanandrana an'i Ubuntu, Mint, Arch, Xubuntu, Mageia (ny tiako indrindra sy ny rafitra malalako ankehitriny). Nitsidika tranokala aho, nahita olana ary nanome vahaolana hafa. Tiako ny manao compute amin'ny ankapobeny. Amin'ity tranga ity dia mila manala baraka anao aho amin'ny tsy fisian'ny fahaiza-mandanjalanja amin'ireo mpampiasa Linux vaovao izay tokony ahitsinao. Nametraka an'i Mageia tamina olona maromaro izay mampiasa ny rafitra amin'ny fiainana isan'andro aho, ary tsy nanana olana izy ireo, raha marina fa nanontany ahy zavatra marobe izy ireo, saingy tsy nisy zavatra tsy mahazatra, satria mifanaraka daholo isika, linux nandroso be tamin'ny resaka traikefa an'ny mpampiasa. Tokony hotadidintsika fa izay mampiasa ny rafitra ampiasaina isan'andro, tsy maintsy mianatra (raha misy zavatra napetraka izay tsy hitany), na kely aza izany, avy amin'ny olona iray nanatanteraka azy, ary mahaleo tena ity. ny mitady an-tserasera, tutorial, bug, sns, satria tsy ny mpampiasa rehetra no manam-potoana hikarohana sy hanadihady ny tranonkala. Ohatra iray mazava kokoa, Mageia 3 napetraka tamina havany, manontany zavatra maromaro amiko izy, izay tsy mitovy amin'ny Windows fotsiny amin'ny ... fa tsy mitovy ny fisehony ...
Valiny tamin'i Rocholc
Angamba (heveriko) ny olana dia amin'ny fomba nandikana ilay lahatsoratra.
Araka ny efa nolazaiko tamina fanehoan-kevitra 10 mahery, ny fitsikerana ahy dia natao ho an'ireo mpampiasa izay tsy manana fomba fanao tsara rehefa mangataka fanampiana izy ireo, izay mangataka amin'ny fomba feno fahefana mba hamahana ny olan'izy ireo, rehefa ... izany tokoa, Ny olan'izy ireo sy ny tenany dia tsy mbola nanandrana nanamboatra azy ireo akory.
Raha mitondra an'izao tontolo izao ivelan'ny siansa momba ny solosaina ny lahatsoratra, dia mety hanontany tena ny mpanoratra raha tsy ampy ny olombelona izay tsy mandray anjara na inona na inona amin'ny planeta. Mety ho tsara ny famongorana olona an-tapitrisany vitsivitsy, total, tsy manam-pahalalana izy ireo.
Mihevitra aho fa mandray anjara daholo isika rehetra, ary tsy afaka manome tsiny ny HOYGANs ho tsy nahita fianarana sy tsy manaja nefa tsy nanome azy ireo farafaharatsiny mba hianarana.
Mamaly an'i litos523
Raha esorina amin'ny siansa informatika ity lahatsoratra ity, tsia, tsy hoe misy olona sisa tavela (na dia ... tsara ... LOL!), Misy olona tsy manome zavatra mahasoa ny planeta akory, ny fiarahamonina, ny firenena, lavitra an'io dia manorisory sy manisy ratsy antsika fotsiny izy ireo. Ohatra, ny mpanolana zaza, mpamono olona serial, ity karazan'olona ity raha misy "tafahoatra" na tsia, mety ho adihevitra izay ahafahan'ny sasany maneho hevitra mifototra amin'ny etika diso, ary ny sasany kosa tsy, fa ny tiana hambara dia ny olona toa ilay voalaza etsy ambony heverinao ve fa iza no mendrika ny tsy hanana fahalalahana?
Manontany anao aho izao, betsaka ve ny olona sa tsy betsaka loatra eto amin'ity tontolo ity? 😉
Ny famoahana ilay lahatsoratra amin'ny tontolon'ny solosaina dia toy ny famoronana lohahevitra tsy misy fotony tsy misy ifandraisany amin'izany.
Miala tsiny aho KZKG ^ Gaara fa tsy mitovy hevitra aminao aho. mpampiasa vaovao foana no mandray anjara. Ny ankamaroan'ny diso, raha tsy izy rehetra, dia manana (araka ny fantatry ny rehetra) rafitra fampandrenesana lesoka izay manampy ny mpamorona hamaha ny bibikely, ka mpampiasa vaovao manampy ankolaka hanitsy azy ireo. Etsy ankilany, ny fanontanianao dia manampy anay hatrany, tadidio fa ny valin'ny fanontaniana dia valiny ary ireo valiny ireo dia namonjy ny hodintsika mihoatra ny indray mandeha. ka hafatra ho an'ny mpampiasa vaovao rehetra, «anontanio izay rehetra tadiavinao, manampy anay ny fanontanianao ary raisinay tsara»
Aza matahotra fa zonao ny tsy mitovy hevitra friend namana
Mikasika ilay tatitra momba ny bibikely, tsy haiko hoe hatraiza ny tena marina na tsia, azoko antoka fa mpampiasa an-jatony maro be no tsy miraharaha na manidy ny varavarankely izay milaza hoe "Alefaso ny tatitra momba ny bibikely" satria mampatsiahy azy ireo ny amin'ny hoe "Send or aza mandefa tatitra "WindowsXP, izany na tsy fantatr'izy ireo fotsiny izay hatao amin'izany.
Na izany na tsy izany, misaotra betsaka amin'ny fanehoan-kevitra, mahafinaritra be ny mamaky valin-teny fahalalam-pomba toy izany, misaotra betsaka.
Somary tafahoatra ianao. Ny azoko azoko tamin'ilay lahatsoratra dia ny hoe Gnu / Linux dia tsy voatery ho lasa varavarankely, fa tsy mila ataontsika mandeha mankamin'ny Linux daholo ny mpampiasa windows. Ny Linux tsotra dia safidy iray hafa, misokatra ho an'izay maniry hampiasa azy, fa tsy miady mba hahazoana mpampiasa.
Raha tsy diso ny fandikako azy dia miombon-kevitra amin'i KZKG Gaara aho
Heveriko ihany koa fa ny mpampiasa Linux dia tokony hanahirana bebe kokoa amin'ny fanaovana ny fombantsika manokana fa tsy ny hanahaka ny fironana napetraky ny hafa.
Ny zavatra ilaintsika dia ny fampiasan'ny olona bebe kokoa azy, mba tsy hanaovan'ny olona amd am-panajana ny mpamily mihidy ho ratsy toa ny ataony.
Ny fanapahan-kevitra hanatsara ny mpamily na tsia dia TSY ny olona eo amin'ny fiaraha-monina no manao azy, tsy ny mpampiasa no mandray izany fa ny mpitantana ny AMD no manapa-kevitra. Inona no manakana anao tsy hanao mpamily tsara kokoa ho an'ny mpampiasa 1000 fa tsy miandry 1.000.000? ...
Misaotra, MISAOTRA * - *
TENA MAFY nefa mahafinaritra be ny mahafantatra fa misy mahatakatra ahy, mahafinaritra ity fehezantenyo ity: «Gnu / Linux tsy voatery ho lasa varavarankely, tsy mila ataontsika mandeha mankamin'ny Linux daholo ny mpampiasa windows.
watasi dia hoy izy:
Namporisika ny Linux aho taloha, saingy novakian'izy ireo be loatra ny baoliko tamin'ny fanontaniana momba ny fametrahana, configurations (webcam, flash, audio, skype, netflix, sns). Ankehitriny dia mbola mampiasa Debian ihany aho fa mamporisika ny antivirus Windows7 + ary dia izay.
Mamaly an'i watasi
Mampiasa ny Linux Kernel i Google ary mamorona rafitry ny horonantsary manokana - tsy mampisy tabataba toa an'i Mir - ary manana Android OS be mpampiasa indrindra amin'ny telefaona finday sy Chrome OS izay nahazo ny solosaina finday mora vidy - ary tsara - ilay ampahany narian'i ASUS tamin'ny fanesorana ny Linux - Xandros - ary nametraka MS WOS tafiditra tao anatin'ny iray amin'ireo tolotra ratsy indrindra tao amin'ny orinasa na ohatrinona na ohatrinona ny vola lanin'ny MS taminy.
Etsy ankilany tsy mahomby ny MS WOS 8 Ultrabook lafo vidy ary tsy hahomby ny hybrida MS WOS 8. Inona no andrasan'ny Intel amidy miaraka amin'i Tizen - linux iray hafa?
Ny mpampiasa mahazatra dia tia Linux nefa tsy fantany,
Raha misy orinasa mametaka azy ary mivarotra azy tsara, Xandros, Android, ChromeOS + Crouton, ary ny FirefoxOS Tizen na trondro ho avy dia afa-po, ary antenaiko fa ny telefaona Ubuntu izay mampanantena zavatra betsaka, dia manana ACL - sosona fampifanarahana Android - raha ny marina dia tsy fantaro fa mbola tsy misy ACL ho an'ny birao Linux - tsy tokony ho sarotra ny manao karazana Crouton miaraka amin'ny Android X86 hahafahana milalao klavie + totozy amin'ny solosaina birao -
Ubuntu dia manomboka apetraka mialoha be dia be any Azia, Amerika atsimo dia tsena iray hafa tena mahaliana noho ny fitomboan'ny harinkarena, nefa mbola ambany ny fahefa-mividy raha oharina amin'i Etazonia, ary tsy vitan'ny mitahiry amin'ny OS ihany, fa koa amin'ny fonosana sy teknika. eo an-toerana ny fanampiana, manatsara ny toekarena.
Mijanona miaraka amin'i Manjaro aho, mbola ao anaty beta, rehefa milamina dia tsy hanana fifaninanana ho antsika izay maniry ARCH azo antoka sy voamarina tsara
Aleo ilay zavatra, Ale, indraindray ianao tsy mahay mandanjalanja kokoa noho izaho, ary mazotoa aho matetika.
Ny fomba fiasao, amin'ny lafiny iray dia tsy ratsy, tokony ho hitanao ihany koa fa eo amin'ny fiarahamonina dia misy andriambavy fasika marobe izay, na inona na inona fanehoan-kevitra mikorontan-tsaina fotsiny, dia tomany. Toy ny misy ihany koa ny hafa izay tena tsy manaiky ny hevitrao ary milaza aminao hoe manao ahoana izany, tsy misy hatezerana.
Ahoana ny hevitro? Ho ahy ireo mpampiasa "mahasoa na tsy misy ilana azy" dia tsy misy, ny sasany izay mahalala bebe kokoa noho ny hafa ary amin'ny Linux dia manana mihoatra ny "ireo izay tsy mahalala" noho ireo izay mahalala isika, ary maro no tsy te hahalala akory, izany tsy maninona.
Ny tiako holazaina dia, voalohany, fa raha betsaka ny olona ilaina hitombo ny rafitra ary ny olona mahalala toa anao sy ny maro hafa, dia azon'izy ireo ampiasaina izany tsena izany amin'ny tsena feno (tsy misy fanafintohinana, fa io no teny marina) tsy mahalala, toa izany mitranga amin'ny Windows na OSx, izay iasan'ireo mahalala, dia andoavany izay fantany.
Noho izany, amin'ity karazana tranga ity dia mahasoa ny kalitao ny isa 😉
Ankoatra izany, toa sekta ve ny hevitrao? Fuck it, ity dia tranonkala maimaim-poana ahafahanao maneho ny tenanao raha mbola tsy mikasika ireo lohahevitra sasany izay tsy mifanaraka amin'ny lohahevitry ny bilaogy ianao.
Tsy misy lehilahy mihitsy, ny fanontaniana tsy hoe manana fahaiza-mandanjalanja kely na betsaka izy, ny fanontaniana dia hoe novakiany (sy azony) tsara izay lazaiko, tongava fa tsy hitako izany?
Tsy miteny hala aho! hamongotra ireo vaovao tsy lavitra azy isika (raha ny marina ary na dia maro aza ankehitriny no tsy mino an'io, izaho dia iray amin'ireo miaro ny vaoavao), fa milaza tsotra fotsiny aho hoe tokony hampiseho fahalianana bebe kokoa amin'ny famahana ny mpampiasa ny olan'izy ireo manokana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, tena mahafinaritra ny mangataka fanampiana ary milaza fa "raha tsy manampy ahy izy ireo dia hajanoko ny linux, banga ny linux" ... na zavatra toa izany, ny hevitra dia ny manandrana mamaha ny olana ny tsirairay, raha sanatria tsy afaka manontany mazava ho azy tsara ny fanampiana.
Na izany na tsy izany ... Malahelo aho mamaky fanehoan-kevitra maro (na dia ao amin'ny MuyLinux aza ny sasany dia miantso ahy hoe fasista, WTF!), Ny marina ... ny fahadisoam-panantenana no tsapako rehefa mamaky hevitra vitsivitsy aho ... 🙁
Tsy ilay vondrom-piarahamonina natombokay roa taona lasa izay Alejandro, ankehitriny dia manana fangaron'ny adala 80% sy olona 20% izahay, ary avelao izy ireo handoro ahy raha tiany izany, satria talohan'ny tsy hitako ny tokony hizarana mpivaro-tena na mandefa olona manaitaitra, alohan'ny hipetrahako ary hanana kofehy ifanakalozan-kevitra tena matanjaka ary nirehitra mihitsy aza, saingy tsy nisy mihitsy, tonga hatrany amin'ny resaka manafintohina.
Niova ny zava-drehetra, nolazaiko foana izany ary fantatrao izany, ankehitriny manana olona marobe manana "fahatsapana fanavaozana vaovao" isika izay sosotra amin'ny hadalana rehetra mamaky sy mihevitra fa mpiady ara-pitondrantena, manana fahitsiana ara-politika ... eo alohako azony atao ny miteny "any amin'ny helo amin'ny zavatra rehetra" ao anaty lahatsoratra iray ary tsy nisy tafintohina, ny tsirairay dia nahatakatra fa tsy teny ratsy na fandikan-dalàna izany, fa fiteny tsotra kosa, fitenenana.
Izao, Jah! Ankehitriny miteny aho hoe "fofonaina" ao anaty lahatsoratra iray ary mitsambikimbikina ny rehetra hilaza zavatra toy ny "andriamanitro fa ambany tokoa ny nianjera nanomboka ny Linux" ...
Tsy izahay intsony no vondrom-piarahamonina matotra nahalala ny fomba fandikana ny fomba fitenin'ireo nanoratra, vitsy taminay sisa no tena namaky izay voasoratra ary tsy nanodinkodina ny masontsika izahay ary nitsambikina tamin'ny lelafo nefa tsy nieritreritra indroa.
Ny vondrom-piarahamonina, na iza na iza maharary azy, dia tototry ny imbeciles, ary tsy te hiteny aho hoe izy rehetra, fa misy, misy ary amin'ny ambaratonga lehibe kokoa noho ny teo aloha.
Mampalahelo fa misy foana ireo karazan'adala izay tonga miteny tsy misy fotony toa ny pomade masina. Tena miteraka fangorahana izy ireo.
Raha tena te hanao kabary tsara izy ireo dia nanao izany. Mazava ho azy fa tsy FayerWayer io na tranokala hafa miankina betsaka amin'ny dokambarotra AdSense na amin'ny antoko fahatelo (ary tsy dia kely loatra amin'ireo mpanoratra kopia izay te hanao lelafo hahazoana fitsidihana bebe kokoa), noho izany tiako ho nisy ny fanehoan-kevitra teto (anisan'izany ny tenako) antonony. Raha izaho no tonian-dahatsoratra, dia faly aho nanao izany, saingy satria mpandray anjara antonony aho dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny hiditra amin'ny adihevitra.
Ny zavatra mampalahelo indrindra amin'ny maha-ao amin'ny forum an'ny adala dia ny fiarovan-tena hatrany amin'ny fanafihana Ad-hominem Ary satria tian'izy ireo ny manafika, dia tsara kokoa ny mamela azy ireo hanao hadalana (na farafaharatsiny, raha miatrika ny risika ianao, toy izay ny manodinkodina anao amin'ny fomba hendry indrindra ary miseho ho adala goavambe).
Na izany na tsy izany, ireo izay manolo-tena amin'ny fampandehanana matetika ireo mpampiasa Hispanika Linux amin'ny fiantsoana antsika hoe olona adala, dia adala hafa fotsiny.
Nano, tsy izao ve no ataonao ny fiavonavonana (sy ny lesoka) mino ny 20% ... toa ilay manipy ny hatezerana dia ianao 😉 Ataovy ao an-tsaina fa zon'ny olona ny manao asshole ary mitsahatra tsy manao izany intsony , ary miditra amin'ny teny hoe olona isika rehetra.
Taloha lasa izay dia nolazaiko tamin'i elav fa tsy azo ialana ireo zavatra ireo raha mitombo ny vondron'olona mpamaky, ary tsy azo ihodivirana izany. Te hanana fiaraha-monina tsara ve ianao? Avy eo dia mila manidy azy ianao ary mijanona amin'ny naha-ianao anao ... izay toa ahy manokana ihany koa.
Ary ... ralehilahy, tapitra ny antsasaky ny antsasanao. Voalohany, miala tsiny aho noho ny tsy fahalalam-pomba ny hevitro voalohany, fa eto kosa dia ny miady amin'ny fanafahana ireo mpampiasa amin'ny ziogan'ny rindrambaiko tompona, fa tsy ny famoronana sekta mpijirika tsara tarehy.
Jereo raha nilaza i Fidel hoe "aleoko miady amina mpiady anaty akata mahay vitsivitsy noho ny amin'ireo tantsaha tsy dia voaofana an'arivony" ... ho hafa ny tantara.
Heveriko fa tsy maintsy mazava tsara amintsika ny tanjontsika.
Angamba tsy nandresy izy ary tsy dia lalina loatra izy ireo.
Ny zavatra, tsy mila "miady zioga" koa ianao satria tsy misy izany. Tsy toy ny eritreritry ny olona maro fa tsy misy manery anao hampiasa Windows, na oviana na oviana ianao dia afaka manova ny rafitry ny fandidiana, ary raha tsy izany dia satria tsy tianao ilay izy.
Toy ny ohatra, izao dia mampiasa Chromium Nightly amin'ny Windows 7 aho (Mampalahelo fa tsy PC-ko izany).
Tsy izany no tiako holazaina.
Ny ziogan'ny tsy mahay mampiasa programa araka ny itiavanao azy.
Ny ziogan'ny tsy fahafantarana ny fomba fiasan'ny programa na ny zavatra ataony.
Ny ziogan'ny tsy fahafahanao manova io programa io mba hiasa araka ny itiavanao azy.
Ny ziogan'ny tsy fahafahanao mizara an'io programa io araka ny itiavanao azy.
Zavatra efa malaza eto, fa tsy maninona ny manoratra indray.
Ny marina, heveriko fa ry zalahy, matotra, tsy fantatrareo izay atao hoe Free Software. Ary heveriko fa izany no hadisoana goavan'ny lahatsoratra. Ary avy eo, amin'ny fanehoan-kevitra dia noraisin'izy ireo tamin'ny zavatra toy ny "tsy mila maka tahaka ny varavarankely izahay" ?? Ary avy eo nomen'izy ireo marika izay mamela ny heviny ho troll ary tsy fantatro izay. Ary ny tena marina dia tsy namaky ronono ratsy aho tao amin'ireo fanehoan-kevitra. Afa-tsy ireo izay miantso troll sy flammer anao, ary "hazavao amiko izay fantatrao" (izany hoe miavona amin'ny fart).
Ary ity any amin'ny toerana itondran'izy ireo azy ao amin'ny fanehoan-kevitra ao amin'ny Windows dia lainga. Fantatrao ve hoe impiry no miantso ny Windows na Microsoft ao amin'ilay naoty izy ireo? 0 (aotra) Tsy iray ... ka heveriko fa ny zavatra tsara indrindra dia ny fitsikerana tena samirery, na miaiky fotsiny fa nisy tsipelina diso tsipelina ary nisy zavatra takatra izay tsy natao holazaina. Fa izao ny fitondrana an'io avy amin'ny Windows dia resaka tsy mitombina. mahafaly
KZKG ^ Gaara, azoko lazaina aminao fotsiny fa tsy nikasa ny handrehitra afo amin'ny volanao aho, ankoatry ny zavatra hafa satria tsy mila izany aho; tena tsotra ny fananganana lelafo. Raha ny marina dia nijery manodidina aho eto ary misy ny fanehoan-kevitra na masiaka kokoa noho ireo natokana ho anao ao amin'ny MuyLinux. Etsy andanin'izany, tsy misy miantso anao hoe fasista, antsoin'izy ireo fa fomba fanao manokana izay lazainao, izay tsy mitovy, fasista. Ary ny marina dia miavaka io hevitra io.
Fantatro fa tsy milaza na inona na inona momba ny famonoana olona ianao, fa kosa miaro ny fitondran-tena ny olona ary mandray andraikitra, ary manaiky aho fa izany no idealy, na dia mino koa aho fa tsy mitombina izany (hazavaiko ao amin'ny valinteniko izany rehetra izany ).
Rehefa avy namaky ny fanazavanao aho dia manome ahy ilay fahatsapana fa tsy nifidy tsara ny teny ianao, zavatra mety hitranga amin'ny olona rehetra. Fa izao:
Izaho manokana dia mieritreritra fa ilay hevitra ampitain'ireo teny ireo dia mifanohitra tanteraka amin'ny hetsiky ny rindrambaiko malalaka.
Na izany na tsy izany, fiarahabana sy fiatrehana ny tafiotra, mandalo faingana 😉
Mazava ho azy fa tsy izany, fantatro fa tsy mikasa ny handrehitra afo ianao amin'ny volako.
Ny tena marina, ny ezahiko holazaina dia ny hoe tokony hahalala ny fomba fitondran-tena ny tsirairay, fa raha manana olana amin'ny Linux ianao dia io no olanao voalohany, raha tsy manao ezaka kely akory ianao amin'ny fanandramana hamaha izany, amin'ny inona marina ve ianao hitaky ny hamahan'ny hafa anao ho anao?
Eny, angamba tsy nofidiko tsara ny teny satria ... tsy fantatro, mety manota aho eto amin'ity izao tontolo izao ity noho ny tso-po loatra, ny marina loatra, amin'izao fotoana izao dia misy manompa na tafintohina na inona na inona amin'ny internet, avy eo izy ireo te-hivoatra amin'ny etika diso sy ny fitondran-tenany diso mba te ho marina indrindra eo amin'ny fiaraha-monina / ara-politika… O_O…
Momba ny oram-baratra, efa androany ... androany, tsy raharahako 😀
Hanohy hizara fampianarana mandroso sy tsy dia mandroso aho, toro-hevitra, torohevitra, zavatra mahaliana ... izay amin'izao fotoana izao, dia mihoatra lavitra noho izay ataon'ny olona hafa izay mino fa zony, nefa tsy nandika tsara izay nolazaiko (na farafaharatsiny, tsy omena ahy ny tombotsoan'ny fisalasalana), mino izy ireo fa manan-jo hitsikera ahy araka izay tadiaviny.
Manaiky tanteraka aho fa misy mpampiasa maro izay mety hiteraka olana raha misy ny fifindra-monina goavambe mankany GNU / Linux.
Raha ny amiko dia mpanolo-tsaina mpanampy ara-teknika aho isan'andro ary mila miatrika ireo olona tsy mahalala akory hoe inona ilay hoe tranonkala iray, izay mampifangaro azy amin'ny Google ny motera fikarohana (tsy dia izany loatra ny olana. Azoko hazavaina); Mipoitra anefa izany rehefa hain'izy ireo ny tsy mitandrina mba hangataka fanampiana. Mampiasa fomba ratsy izy ireo, teny ratsy ary manjary misafotofoto mihitsy satria zavatra tsy azon'izy ireo izany.
Heveriko ihany koa fa misy etsy andanin'izany, maro ny guru GNU / Linux izay rehefa tonga ny fotoana hananana ambaratonga iray dia lasa miavonavona, tsy mahalala fomba ary tsy miteny izy ireo. Tsy azon'izy ireo fa tsy ny tsirairay no manana fahaizana mahatakatra lafin-javatra sasany amin'ny teknolojia ary raha tsy te-hamaly izy ireo dia tokony ho avaizina farafaharatsiny.
Indraindray ny olana dia ny fihetsika fotsiny fa tsy ny fahalalana.
"Indraindray ny olana dia ny fihetsika fotsiny fa tsy ny fahalalana."
+1! ... Ho ahy dia mora kokoa ny manafoana ny asa, noho ny mampihena ny setroky ny mpirehareha ary misy ny fifandonana amin'ny loha poakaty amin'ny loha izay tsy te hamoaka ny fahalalany ... Lohahevitra tsy misy farany .. .
webx21 dia hoy izy:
Heveriko fa KZKG ^ Gaara fa tsy ny atin'ny lahatsoratranao ny olana, fa amin'ny fomba fanehoanao azy
Amin'ny toerana iray ao amin'ny lahatsoratranao dia nanamarika ianao fa "ny fitondran-tenan'ny mpampiasa fotsiny no resahina", ary mino aho fa ny hevitro fa tsy maintsy io no lohatenin'ity lahatsoratra ity
Satria toy ny mpampiasa Linux marobe, dia vao tsy ela akory aho dia olon-tsy fantatra, fa tsy toy ny hafa, nanana ny te-hianatra isan'andro aho momba ny Linux ka hiala amin'ny tsy fahalalako.
Mampalahelo fa tsy izany no toetran'ny maro an'isa, ary toy ny amin'ny zava-drehetra eto amin'ity fiainana ity, dia ho hitanao hatrany miaraka amin'ireo katsentsitra izay tsy te-hanao na inona na inona ho an'ny tenany na hanome zavatra tsara amin'ny ambiny.
Feno fankasitrahana tanteraka aho ho an'ireo mpampiasa toa anao sy i Elav izay nandany ny ampahany tamin'ny fotoanany sarobidy hizarana ny fahalalany amin'ny tontolon'ny Linux
Mamaly amin'ny webx21
Eny, heveriko fa marina ny anao, ny olona (araka ny hitako) dia namaky ny lohatenin'ilay lahatsoratra ary haha, ny sisa amin'ny lahatsoratra novakiany saika efa voalamina mialoha.
Izaho, toa anao, toy ny olon-drehetra, dia vao novonoina (satria tsy teraka niaraka tamin'ny fahasambarana nahalala ny zava-drehetra hatrany am-bohoka) aho, ary tsapako fa imbetsaka aho rehefa nametraka fanontaniana tamin'ny forum iray dia tsy ny tsara indrindra ny tsipelina nataoko, ny fampahalalana izay nanome (hazo) dia saika tsy nisy tamin'ny voalohany, fa tsy naveriko mihitsy, averiko ihany fa TSY nangataka fanampiana aho ary mainka ny fomba ratsy.
Na dia mitsikera ahy aza izy ireo, na dia afaka miantso ahy amin'izay tiany aza izy ireo… dia hanohy handray anjara amin'ny zavatra fantatro aho, miaraka amin'ny fampianarana mandroso sy tsy dia mandroso, toro-hevitra sns., Tokony hisy hanao izany ve? 😀
miarahaba ary misaotra tamin'ny hevitrao
Any Amerika Latina, indrindra, nilaozana ny fanabeazana fototra, tsy ampy hampivelatra ny olombelona ny drafi-pianarana. Ny fisian'ny Internet dia ahafahana manakatona kely ny elanelana misy eo amin'ireo izay mahalala, miaraka amin'ny fahaizany miteny espaniola kely fotsiny. Ny faniriana hianatra fiteny vaovao ihany no ho faniriana. Tamin'ny taona lasa dia tsy afaka niditra tamin'ny Linux tamin'ny alàlan'ny famandrihana amin'ny magazay misy fizarana kamboty fotsiny ianao, fa amin'ny teknolojia dia tsy ilaina intsony io fampiharana io. Samy manana ny habetsany sy ny kalitaon'ny mpampiasa sahaza azy ireo ny GNU / Linux sy ny Microsofot nefa tsy latsaka amin'ny fanatisme, dia izay ny zava-misy. Fa toy ny misy singa tsara sy ratsy an'ny olombelona, ​​misy koa bilaogy tsara sy ratsy, miaraka amin'ny lohahevitra miverimberina, miaraka amin'ireo olona mitovy anjara aminy, tsy misy famantarana manokana ihany koa. mahafaly
mihahaha.fernandez dia hoy izy:
Tsy dia somary mahery setra ianao, toa ME fa nandany izany ianao, ny tanjon'ny Free Soft, amin'ny farany dia ny hanafaka ireo izay tsy afaka mandoa lisansa, tadidio fa, .. >>> salu2 no hajaiko indrindra, Mamaky hatrany ny lahatsoratrao aho
Mamaly an'i miguel.fernandez
Ny tanjon'ny SWL dia ny hanafaka ireo izay te hovotsorana, tsy manana na tsy manana izay tokony aloa amin'ny fahazoan-dàlana.
Tsy tena manandrana manilika olona na iza na iza aho na olon-kafa na olon-kafa, fa miezaka fotsiny aho mba hanana feon'ny fieritreretana ny tsirairay ary hahatakatra fa afaka manandrana mamaha ny olany manokana izy ireo, ary sakaizan'andriamanitra i Google, ary (ambonin'izany rehetra izany ), raha tsy mahavita mamaha ny olany manokana dia tokony hangataka fanampiana amin'ireo forum sy vondrom-piarahamonina eny izy ireo, saingy miaraka amin'ny fanabeazana, ny fahalalam-pomba, sns.
pebelin dia hoy izy:
Mazava ho azy, ny zava-misy fa misy mpampiasa maro rindrambaiko maimaimpoana dia misy fiantraikany amin'ny ho avin'ny rindrambaiko maimaimpoana.
Arakaraky ny maha-izy antsika, ny kely kokoa ny hery mikatona ao amin'ny fisie ios (doc, xls ...) hananantsika hampiasa oh. maimaimpoana nefa tsy voadona satria ianao dia iray amin'ireo vitsy mampiasa ireo endrika maimaimpoana ireo.
Arakaraka ny maha-misy antsika, ny mpamokatra fitaovana mazàna dia mety ho mpamily programa ho an'ny sehatray. Ary mitovy amin'ny rindrambaiko; raha valve na etona no mieritreritra ny handany vola hanohanana ny gnu / linux, dia satria nahatratra (na te-ho izy) mpampiasa maromaro izy ireo, tsy salama na tsia, gurus na vaovao. Ary mahasoa ny rehetra izany.
Arakaraky ny maha-izy antsika no arovantsika bebe kokoa ny fahafahantsika, satria mahomby kokoa izy io ary mahatohitra ny fanafihana ataon'ny izao tontolo izao raha toa ka mankafy azy isika rehetra.
Mihevitra aho fa manaiky anao aho ary tsy izany. Avelao aho hanazava: ekeko fa, raha jerena ny kalitaon'ny fiarahamonina Linux (angamba noho ianao tsy maintsy miatrika olana sasany, indrindra raha tianao ny "milalao" sy manandrana zavatra) dia misy ifandraisany amin'ny fandraisan'anjaran'ny forum sy ireo vahaolana mitranga ao aminy. Ka ambonin'izany rehetra izany dia zava-dehibe ny hahatongavan'ireo olona "mandray anjara" amin'ny faran'ny farany ambony sy "hanelingelina" ny kely indrindra. Heveriko fa olona maro no diso fandray anao: tsy ny vaovaom-baovao (ampiarahiko amin'ny lafiny iray), tsara ny anontanian'ny olona, ​​saingy tsy maintsy atao amin'ny fomba tsara izy io, rehefa avy mitady izany ao amin'ny boky torolàlana (rangahy malala!), manandrana mametraka ny ambony indrindra amin'ny famaritana, sns. Amin'izany ny vondrom-piarahamonina dia ho be ranoka, mahomby ary kalitao kokoa.
Izany dia nilaza fa tsy hanaiky aho hilaza hoe "ireo izay tsy mijanona ao amin'ny Windows, na dia vitsy aza isika." Ary tsy aho satria tsy mahita ny Linux ho toy ny farany (na tsy farafaharatsiny farafaharatsiny) fa ho fitaovana. Liana aho fa mahatakatra sy miaina ny filozofia amin'ny rindrambaiko maimaimpoana ny olona, ​​tiako ny hianaran'ny olona mitady endrika na vahaolana ao amin'ilay boky torolalana, tiako ny hahafantaran'ny olona ny fomba anontaniany sy anaovany izany amin'ny fanabeazana. Ka tsy manampy ahy mihitsy izany hoe betsaka ny olona tsy manao izany ary mijanona ao amin'ny Windows, satria ny tanjoko dia ny hampiasa ny solosain'izy ireo tsara kokoa sy etika kokoa. Mazava ho azy fa tiako ny Linux tsara kokoa, manana fanohanana bebe kokoa, sns. Saingy tanjona faharoa (pragmatika kokoa ary somary tia tena).
Io no lalana sarotra, fa ilay mitondra anao any amin'ny seranana tsara indrindra amin'ny farany :).
"Tsara ny fanontanian'ny olona, ​​saingy tsy maintsy atao amin'ny fomba tsara izy io"
Izay marina no tiako nolazaina.
Tsy afaka nifanaraka bebe kokoa tamin'ny hevitrao aho.
Angamba (araka ny nolazaiko tamin'ny fanehoan-kevitra hafa) Tsy azoko tsara ny hevitro, ny hevitra dia ny tsy hitsapana ireo rehetra maniry hampiasa Linux, ary ireo izay tsy mankato azy hijanona ao amin'ny Windows (araka ny voalazan'ny mpampiasa iray hafa), fa fa fantatry ny olona rehetra (ny vao manomboka, ny mandroso sns.) fa ny Linux dia fomba fiainana, filozofia, izay tokony hanaovan'ny tsirairay ezaka faran'izay betsaka mba handraisana anjara, fanampiana, fandraisana anjara ary raha sendra tsy afaka manampy amin'ny fomba rehetra (sarotra zavatra ... fa tsara ...), farafaharatsiny mba tsy angatahin'izy ireo hanokana fotoana hafa hamahana ny olany ny hafa, mba tsy hampitahorin'izy ireo amin'ny hoe "na manampy ahy ianao na miala amin'ny Linux" ... Ara-dalàna ny manana olana, ara-dalàna kokoa aza ny tsy mahay mamaha tranga iray, fa ny tsy mahazatra (na tsy tokony hatao) dia ny mangataka fanampiana nefa tsy manana fanabeazana kely akory 🙁
Ny hevitra amin'ity lahatsoratra ity dia iray monja: 1. Mamorona fahatsiarovan-tena amin'ny mpampiasa, fa ny tsirairay na manampy na farafaharatsiny manana ny fahamendrehana sy ny fanabeazana hanampy ny hafa izay hanampy azy ireo
Ie eny… somary mikorontana ny famakiana LOL!
Misaotra ny hevitrao, namana
gonzalezmd (# Bik'it Bolom #) dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara, manasa fandinihana izany. Tsara ny mieritreritra ny hamerina kely ny vola be azontsika. mahafaly
Valio i gonzalezmd (# Bik'it Bolom #)
Ny olana dia arakaraky ny fampiasan'ny mpampiasa ny rafitra no tsara kokoa ny fanohanana ny fitaovantsika.
.. Ary noheveriko fa tamin'ny linux vitsivitsy (kubuntu) vitsivitsy fotsiny dia efa nanampy zavatra izy io ..
fanitsiana, ny tiako holazaina.
Ary noheveriko fa ny fanampiana ny Linux (Kubuntu) fotsiny dia efa nanampy zavatra….
Tsy manao programa aho, tsy mitovy ny asako, mampiasa Linux aho.
Salama Gaara. Efa ela aho no tsy nanome hevitra momba ilay pejy.
Mahatsiaro ho mpampiasa afovoany aho eo anelanelan'ireo fariparinao ireo. Tsy izaho no karazana manao tatitra momba ny kitay bibikely, manoratra lahatsoratra manazava ny fomba fanaovana zavatra, manamboatra bibikely, manandrana betas, na toy izany. Saingy tsy iray amin'ireo tezitra amin'ny GNU / Linux aho rehefa tsy mahavita mamaha zavatra iray, na izay mitaky fanampiana amin'ny forum.
Tamin'ny zavatra niainako niaraka tamin'ny GNU / Linux hatramin'ny 2010, dia nisy fotoana nahasosotra ahy, fa ny ankamaroan'ny fotoana dia namaha ny olako aho. Tsy mbola nandray anjara tamina forum mihitsy aho, kamo ny misoratra anarana (nataoko tao amin'ny FromLinux izany noho ny olana sarotra, fa adinoko ny niverina tany). Izaho dia nitady sy nitady hatrany mandra-pahitako. Izaho koa dia nahalala zavatra betsaka tamin'ny fitsapana sy fanazaran-tena. Faly be aho amin'ny GNU / Linux ary, na dia tsy manam-pahaizana ary tsy mahay mamolavola programa, dia efa afaka manao izay rehetra ilaiko aho mba hananana rafitra miasa tanteraka sy tsy misy olana.
Ny toetra iray ananan'ity mpampiasa mpanelanelana ahy ity dia ny tiako hahalalana bebe kokoa: tiako ny hanao izay lazainao fa tsy ataon'ireo mpampiasa "tsy manome na inona na inona". Tsikaritro fa ny olana amin'ny fampianarana sy lahatsoratra sasany dia ny tanjon'izy ireo amin'ny mpampiasa manam-pahalalana ka noho izany dia raisin'izy ireo ho zava-poana sy fahalalana maro izay tsy ananan'ny vao manomboka. Amin'ny famakiana lahatsoratra maro dia tsy maintsy mandeha amin'ny fikarohana Internet foana aho mba hahitako tsara ny tenako ao anatin'ny sahan-kevitra sy hahafantarako izay lazain'izy ireo. Roa taona lasa izay, rehefa nanomboka ny DesdeLinux dia nangataka anao foana aho handinika an'izany.
Eny, te hiala hevitra fotsiny aho. Heveriko fa na dia misy aza ireo mpampiasa izay "tsy mandray anjara na inona na inona" dia hitombo hatrany ny Linux.
Manaiky tanteraka. Na dia mahafeno fepetra ho mpampiasa vaovao aza aho ... satria efa telo taona mahery izay no niarahako tamin'ny Linux, isaky ny manana olana aho dia ataoko izay lazainao: mikaroka aho, manadihady, mamily ny terminal ... Tiako ity. saingy tsikaritro fa noho ny isan'ny olona mampiasa Linux, ny fanampiana dia sarobidy kokoa noho ny volamena ary tsy maro no manolotra azy ... MITENY NY FAHATSARANA ALOHA NY FAHAMARINANA, aorian'izany rehetra izany dia iray amin'ireo fototra niterahan'ny Linux
Raha tsy maninona dia maro ny mpampiasa no mila mahafantatra ny fotokevitra fototra momba ny siansa informatika. Taona maro lasa izay, ny olona iray nametraka ilay rafitra irery dia noheverina ho mpijirika amin'ny ankamaroan'ny olona na Geek mpanangom-bokatra. Saingy amin'izao fotoana izao dia ataon'ny olona rehetra amin'ny alàlan'ny fomba hadisoana fitsarana na inona na inona distro noho ny habetsaky ny fampahalalana amin'ny Internet. Na dia avy amin'ny distro mandroso aza, ireo mpampiasa izay mandray anjara bebe kokoa amin'ny tetikasa sy ny haavon'ny fampandrosoana ihany no heverina ho mpijirika na mandroso.
Izay mahalala ny fiheverana sasany an'ny rafitranao dia afaka manamboatra zavatra mahomby amin'ny grub na ny lohahevitra sary mihetsika. Ireo mpampiasa ireo no afaka mitatitra bibikely amin'ny fomba mandaitra. Hanampy fivoarana maro izany.
Ny Distros dia mametraka tetik'asa maro ao amin'ny repo foana, izay, na dia tsy manana pejy aza izy ireo, dia mahasoa ho an'ny olona iray ary mazava ho azy fa manana alalana ambanin'ny gpl na mitovy amin'izany izy ireo. Raha sysadmin daholo isika, matihanina maro amin'ity faritra ity no tsy hanana asa. Manampahaizana manokana amin'ny solosaina no manam-pahaizana manokana amin'ny zavatra iray.
Raha manana mpampiasa maro kokoa ny GNU / Linux ianao, ny tombony azo dia azo atokisana indrindra satria hanana mpamily maimaimpoana sy mpamorona bebe kokoa amin'ny programa zanatany izahay. Ary koa ny interpolarity bebe kokoa amin'ny fenitra maimaim-poana.
Ny tontolon'ny tsy miankina dia hahazo tombony tsara nefa raharaha hafa io.
Ny zava-dehibe dia ny fampiasana mpampiasa betsaka kokoa hatrany. Misy disto ho an'ny tsiro sy mpampiasa rehetra amin'ny distro rehetra. Ny fanontaniana dia ny handresy.
Isika izay manam-pahaizana na mahay amin'ny distros antsika ankehitriny dia handray soa amin'ny lafiny maro. Hevitry ny tetik'asa GNU foana ny hanana ny endrika sy filozofia mahafinaritra an'ny Unix izay tratry ny zava-drehetra maimaim-poana. Tsy ho an'ny tsy misy na inona na inona raha mijery mihoatra ny birao ny maodelin'ny rafitra manjaka dia ny GNU / Linux.
Christian Daniel Suarez dia hoy izy:
Nampiasa Linux nandritra ny taona maro aho, ny fizarana voalohany napetrako tamin'izany fotoana izany dia ny Conectiva Linux. Manokana aho, mamaha ny olako amin'ity rafitra ity ao amin'ny forum aho fa tsy amin'ny fangatahana fa amin'ny famakiana ny valiny nomen'ny mpampiasa hafa ny olako ihany. Namaky be dia be ireo mpampiasa Linux "mandroso" aho, tsy haiko ny momba azy, miaraka amina faniriana ratsy be ary tsy afaka zakaina amin'ny teboka mampihomehy satria haiko ny manoratra "sudo apt-get install cosme-so- ary-dia "efa heverin'izy ireo ho" lozisialy mpandrindra »ary ny iray hafa dia olona tsy ampy vola. Izay no nahatonga ahy hanjary tsy sahy handray anjara amin'ny forum ary tsy manampy izany karazana hevitra izany.
Valiny tamin'i Christian Daniel Suárez
Mila fampiantranoana VPS ve aho?